မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: May 2011 “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ္စတာ ဂျွန်မက်ကိန်းဟာ မြန်မာ့အရေး ခရီးစဉ် အစိတ်အပိုင်း တရပ် အဖြစ် ထိုင်း-မြန်မာ အခြေစိုက် ဒီမီုကရေစီ အင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်နေ့က တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သလို မဲဆောက်မြို့က မယ်တော်ဆေးခန်းကိုလည်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Photo- senjohnmccainblog
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစု FDB ရဲ့ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဒေါက်တာ နိုင်အောင်နဲ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုး ကိုဘိုကြည် တို့ ကို ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ အရေးကို အမြဲတမ်း စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မစ္စတာ ဂျွန်မက်ကိန်း အနေနဲ့လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေကို ကိုယ်တိုင် သိလိုတဲ့အတွက် အခုလိုတွေ့ ဆုံတာလို့ဒေါက်တာနိုင်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး အတွက် မြန်မာအစိုးရကို အရေးယူ ပိတ်ဆို့တဲ့နည်းရော ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ နည်းပါ သုံးသင့်တဲ့ အကြောင်း ပြောဆိုလိုက်တယ်လို့ လည်း ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ဆိုပါတယ်။
"ကျနော်မြင်တာကတော့ US က ဒီအစိုးရသစ်ရဲ့ သဘောထားတွေ ဘာတွေ ကိုယ်တိုင်သိအောင် ကြိုးစားတဲ့ သဘောဘဲလို့ နားလည်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီကို သိအောင်ရှင်းတဲ့ သဘောလို့ နားလည်တယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ဒီအစိုးရတွေကို ပြောတဲ့အခါမှာ ဖိအားပေးတာရော ထိတွေ့ဆက်ဆံတာရော နှစ်ခူစလုံး သုံးသင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေလို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ရှိနေလို့၊ အကုန်လုံး ပါဝင်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ မရှိနေလို့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ မလာတာကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွါးရေး အခြေခံတွေ မကောင်းလို့၊ ဆိုတော့ အဲဒါတွေကို သူတို့ကို ထိတွေ့ပြီးမှ ရှင်းပြပြောပြ တိုက်တွန်း စည်းရုံးနေတာမျိုးက ကျနော်တို့က ကြိုဆိုပါတယ်။"
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း AAPP တွဲဘက် အတွင်းရေးမှုး ကိုဘိုကြည်ကတော့ အကျဉ်းထောင်ထဲက လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကိစ္စကို ပြောလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
"ကျနော်ကတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အကြောင်း။ အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေတာ၊ ကလေးထောင်တို့ ခန္တီးထောင်တို့မှာ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ နောက်ပြီးတော့ အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ဒီလူတွေကို စားရေးသောက်ရေးနဲ့ ကျမ်းမာရေးအတွက် လုံလောက်တဲ့ ထောက်ပန့်မှုတွေ မရှိဘူး။
ICRC လို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေကိုလည်း သူတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့် မပေးဘူး ဆိုတာတွေကို ကျနော်တို့ တင်ပြတာတွေ ရှိတယ်။
နောက်တခုက အခုလက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ တကယ်တန်း အပြောင်းအလဲအတွက်ကို လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပထမဆုံးက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ထပ်ပြီး ပြောပြတာတွေ ရှိတယ်။
နောက် sanction ရုတ်သိမ်းဖို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကရော ပြည်တွင်းက အမတ်တွေရော ကြိုးစားနေကြတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီလို ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်လည်း ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့က လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာတွေကို ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဘက်က ရပ်ပေးဖို့ လိုတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ပြောပြတာတွေ ရှိတယ်။"
မစ္စတာဂျွန်မက်ကိန်းဟာ မဲဆောက်မြို့က မယ်တော်ဆေးခန်းကိုလည်း သွားရောက်ပြီး လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။
အဲဒီခရီးစဉ်မှာ မြန်မာအစိုးရ အဖွဲ့ ဝင်တချို့ နဲ့ တွေ့ ဆုံမှာ ဖြစ်သလို၊ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင်၊ NLD အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေ၊ CRPP ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ လည်း တွေ့ ဆုံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က လူမှုရေးနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေ အမြောက်အများ လိုအပ်နေဆဲဘဲလို့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို မအင်ကြင်းနိုင်က တင်ပြမှာပါ။ Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:48 PM0comments
By မအေးအေးမာ အင်္ဂါ, 31 မေ 2011
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ကနေ ၃ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့် အရီဇိုးနား (Arizona) ပြည်နယ် ၀ါရင့် ရီပတ်ဘလီကန်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း (John McCain) ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေကို တင်ပြ ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့မှာ ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မစ္စတာ မက်ကိန်းက ပြောသွားပါတယ်။ မစ္စတာ မက်ကိန်းဟာ မဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းနဲ့ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက မေလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ်က အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မဲဆောက်မြို့က ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ရဲ့ ဆေးခန်းကို သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ပြီးနောက် မယ်တော်ဆေးခန်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မနက်ဖြန် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ရှိတဲ့အချိန် စတင်မယ့် သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောသွားပါတယ်။
“အချိန်ဇယား အတိအကျတော့ ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနဲ့ရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိနေပါတယ်။ လွှတ်တော်က ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုလည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ ရပ်တည်မှုအတိုင်း ဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲ အခြေအနေတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာဖို့ အခွင့်အလမ်း ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးသွားမှာပါ။
“ဆိုလိုတာက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ပေးဖို့၊ အတိုက်အခံတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ စလုပ်ဖို့၊ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ တကယ်ပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အစိုးရအကြားမှာ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ပါ။”
မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းကို လေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အရေးကိစ္စတွေကိုလည်း ပြောဆိုသွားမယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
“မနက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားပါမယ်။ အဲဒီမှာ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ဒုက္ခသည်တွေကိစ္စ၊ လူနည်းစု လူမျိုးတွေအပေါ် ဆက်ဆံနေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ ရှိပါတယ်။ မငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့ လူနည်းစုတွေအပေါ် စစ်ဆင် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် သူတို့တွေ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးလာကြရတယ်၊ ဒီလူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အိုးအိမ်နဲ့ မိသားစု နေရာတွေကို ပြန်လိုကြတယ် ဆိုတာကို ထောက်ပြ ပြောဆိုပါမယ်။”
မယ်တော်ဆေးခန်း ရောက်ချိန်မှာတော့ လူထုကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေကို လုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကို ချီးကျူး ပြောဆိုသွားပြီးတဲ့နောက် ငွေကြေးအကူအညီတွေ ထပ်ပြီး ရသင့်တယ်လို့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက အခုလို ပြောသွားပါတယ်။
“ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဆေးခန်းတွေကို သွားရောက် ကြည့်ရှုခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဆေးခန်းမှာ လူနာ ထောင်နဲ့ချီပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ယူနေကြရတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ မဟုတ်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ ဆေးဝါးကုသခွင့် ရကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြုံတွေ့ဖူးသမျှတော့ ဒါဟာ အင်မတန် လေးစား ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ဒါကြောင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက အစိုးရ အနေနဲ့ရော၊ ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ပါ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ရဲ့ လုပ်ငန်းကို ပိုပြီး ငွေကြေး အထောက်အကူတွေ ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
မယ်တော်ဆေးခန်းက ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်ကတော့ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက နယ်စပ် အခြေအနေကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံက အခြေအနေတွေကို ပိုမို သိရှိသွားတယ်ဆိုပြီး အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သူတို့က ဒီကိုမလာခင်မှာ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းကိုလည်း သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းလူထုတွေ၊ ပြည်သူတွေထဲကနေ နယ်စပ်မှာလာပြီး ဆေးကုကြတဲ့လူတွေရဲ့ အခြေအနေတွေကို မြင်တွေ့သွားခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိ ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ မြန်မာပြည်က နယ်စပ်ဒေသမှာရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း လူထုတွေရဲ့ အခြေအနေတွေက ပုံမှန် အခြေအနေ ပြန်ရောက်လာအောင် စီးပွားရေး အရရော၊ နိုင်ငံရေး အရရော ပြန်လည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ တည်ထောင်မှုတွေနဲ့၊ ဒီကြားထဲမှာ လူမှုရေး ပံ့ပိုးမှုတွေ အများကြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေရမယ်။
“အထူးသဖြင့်တော့ သူ့အနေနဲ့ကလည်း သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုလည်း ဆက်လက် ကြိုးစားသွားဖို့ အတွက်ပေါ့၊ သူ မြန်မာပြည်ထဲရောက်ရင် ဆက်လက် ကြိုးစားသွားဖို့၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကိစ္စတွေကို ဆက်လက် ကြိုးစားသွားမယ်လို့ ပြောသွားတယ်။”
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလေးထား ပြောဆိုလေ့ ရှိသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းလိုပဲ အမေရိကန် သမ္မတ ဂျော့ခ်ျ ဒဗလျူ ဘုရှ် (George W.Bush) လက်ထက်ကလည်း သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရှ် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင် ဆေးခန်းကို လာရောက် လည်ပတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မကြာသေးခင်လကပဲ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး မစ်စ် ကန်နီ (Kristie Kenney) ဟာလည်း ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ်က အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့ မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့ မယ်တော်ဆေးခန်းကို လာရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ်က အခြေအနေတွေကို လေ့လာသွားခဲ့ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:45 PM0comments
ဆန်ဈေးများ မြင့်တက်လာမူ ဒေသခံများကို စိုးရိမ်မူပို
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း မိုးဦးကာလ လယ်စိုက်ပျိုးမူ မစတင်မှီ ဆန်ဈေးများ မြင့်တက် လာနေခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းရာသီတွင် စားဝတ်နေရေး ပိုခက်ခဲမည်ကို ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် တ၀ှန်း မိုးများ စတင် ရွာသွန်းလာသည်နှင့်အတူ ဆန်များမှာလည်း အမျိုးအစားအလိုက် နေရာဒေသ အတော်များများတွင် မြှင့်တက်သွားခဲ့သည်။
ယခင် ဈေးထက် တအိတ်ကို ကျပ် ၃၀၀၀ မှ ၆၀၀၀ အထိ အသီးသီး မြင့်တက်သွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ဆန်ကုန်သည်က ပြောသည်။
" စစ်တွေတွင် ဧည့်မထ တအိတ်ကို ယခင် ကျပ် ၁၂၀၀၀ ခန့် ရှိနေခဲ့ရာကနေ ယခု ကျပ် ၁၅၀၀၀ ထိ တက်သွားပြီး ဒေသထွက် ပေါ်ဆန်းမွှေး တအိတ်က အရင် ကျပ် ၂၀၀၀၀ ရှိနေခဲ့ရာကနေ အခု ကျပ် ၂၅၀၀၀ အထိ ဈေးတက် သွားခဲ့ပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ ကျောက်တော်၊ မြောက်ဦးနှင့် မင်းပြားတို့တွင် ဒေသအခေါ် ဆန်ချေ အညံ့စား ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ယခင် ကျပ် ၁၀၀၀၀ ခန့် ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ကျပ် ၁၂၀၀၀ နှင့် ၁၃၅၀၀ အကြားထိ တက်သွားပြီး ဆန်ကြီးခေါ် အကောင်းစား ဆန်တစ်အိပ်မှာ ယခင်ကျပ် ၁၃၀၀၀ ခန့်ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ကျပ် ၁၆၀၀၀နှင့် ၁၈၀၀၀ ခန့်ထိ ဈေးတက်သွားခဲ့သည်။
ဂီရီလေမုန်းတိုင်းဒဏ် အဆိုးဝါးဆုံးခံခဲ့ကြရသည့် မြေပုံ၊ ပေါက်တော နှင့် ကျောက်ဖြူတို့တွင် တခြားနယ်များမှ ဆန်များတင်သွင်းနေရသောကြောင့် အညံ့စား ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ယခင် ကျပ် ၁၂၀၀၀ ခန့်ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ၁၈၀၀၀ ထိမြင့်တက်သွားပြီး၊ အလယ်အလတ်အဆင့် ဆန်တစ်အိတ်လျှင် ယခင် ၁၅၀၀၀ခန့်ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ၂၀၀၀၀ နီးပါး အထိ မြင့်တက် သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ရှိ ဘူးသီးတောင်တွင် ဧည့်မထ တအိတ်လျှင် ယခင် ၁၃၀၀၀ ခန့် ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ၁၆၀၀၀ ခန့်၊ ပေါ်ဆန်းမွှေးတအိပ်လျှင် ယခင် ၂၂၀၀၀ခန့် ရှိနေခဲ့ရာမှ ယခု ၂၈၀၀၀ ခန့်ထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီး၊ မောင်တောတွင် ဧည့်မထ တအိပ်လျှင် ကျပ် ၂၀၀၀၀ ထိ ဈေးတက်နေပြီး၊ ပေါ်ဆန်းမွှေး တအိတ်လျှင် ၃၅၀၀၀ ခန့်အထိ ဈေးတက်နေကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မိုးတွင်းကာလများတွင် ဆန်ဈေးများမြင့်တက်တတ်သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် မိုးရာသီ မ၀င်သေးမှီ ကတည်းက ဆန်ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာနေခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းတွင် ပိုမို ဈေးမြင့် လာမည်ကို ဒေသခံများ အကြား စိုးရိမ်နေကြသည်။
"ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာက အလုပ်ရှားပြီး ၀င်ငွေနည်းတာကြောင့် တရက်လုပ်လို့ တထပ်စာ မဖူလုံ နိုင်ကြပါဘူး။ ခုမိုးနည်းနည်းရွာလာတာနဲ့ ဆန်ဈေးတွေက ထိုးတက်လာနေတာတော့ မိုးတွင်းမှာ ဘယ်လို စားသောက်ကြရမလဲဆိုတာ တွေးပူနေကြရပါတယ်" ဟု စစ်တွေ ဒေသခံ တစ်ဦးကလည်း ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဆန်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာနေခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် ဂီရီမုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်နယ်အ၀ှန်းရှိ ရိတ်သိမ်းခါနီးစပါးခင်းများစွာ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဆန်စပါး ပြတ်လပ်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဆန်ကုန်သည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
"ခုတလော ဆန်ဈေးတွေ တက်လာတာဟာ ဒေသတွင်းမှာ ဆန်စပါးတွေ ပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ နေရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီရီမုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နေရာအနှံ့မှာ ရိတ်သိမ်းခါနီး စပါးခင်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ တချို့ မြေပုံ၊ ပေါက်တော နဲ့ ကျောက်ဖြူဒေသတွေမှာဆိုရင် ဒီရေလှိုင်းတွေ လွှမ်းသွားပြီးတော့ စပါးခင်းတွေအပြင် သိုလှောင်ထားတဲ့ စပါးတွေလဲ လုံးဝ သုံးမရ အောင် ပျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီဒေသတွေကို တခြားနယ်တွေကနေ ဆန်တင်ပို့ပေးနေရတဲ့ အပြင် ဒေသတွင်း ပြတ်လပ်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့် ခုလို ဈေးတက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ၄င်းဆန်ကုန်သည်က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် တစ်သီးသာ စိုက်ပျိုးနိုင်ကြပြီး၊ စိုက်ပျိုးရေးရာသီ မစမှီ ဆန်စပါး ပြတ်လပ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရသောကြောင့် ယခုမိုးတွင်းကာလတွင် ဆန်ဈေးများ ပိုမိုတက်လာပြီး စားဝတ်နေရေး ပိုမိုခက်ခဲလာမည်ကို ဒေသခံများအကြား စိုးရိမ်နေကြရကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:44 PM0comments
ဧရာဝတီ Tuesday, 31 May 2011 19:55
အမေရိကန် အထက်လွတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် အစပြုမည့် သူ၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း အစိုးရနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ကို တွေ့ဆုံပြီး နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရေး အတွက်။ ဆွေးနွေးမည်ဟု ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ထိုသို့ ပြောလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
မဲဆောက်မြို့ မယ်တော်ဆေးခန်း တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဂျွန်မက်ကိန်း (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
“မနက်ဖြန် ကျနော် မြန်မာနိုင်ငံကို သွားမယ်။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့ဖို့ ရှိတယ်။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် ဆွေးနွေးမယ်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိစ္စ၊ ဒုက္ခသည် ကိစ္စတွေကို သွားရောက် ဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ဂျွန်မက်ကိန်းက ပြောသည်။
ခရီးစဉ်အကြောင်းကို အသေးစိတ် ပြောကြားခြင်း မရှိပေ။
ဂျွန်မက်ကိန်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ကလည်း မြန်မာပြည်သို့ သွားရောက်ခဲ့ဖူးသည်။
ဂျွန်မက်ကိန်းနှင့် ယနေ့ စကားပြောဆိုခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်း၏ တာဝန်ခံတဦးဖြစ်သူ ကိုဘိုကြည်က မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေးတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ
လွတ်မြောက်ရေးက အရေးကြီးသည်ဟု ဆိုသည်။
“မြန်မာပြည်မှာ အပေါ်ယံ အပြောင်းအလဲပဲ ဖြစ်လာလို့ကတော့ အလကားပဲ။ တကယ့် အပြောင်းအလဲ၊ စစ်မှန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်” ဟု ကိုဘိုကြည်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ထဲထဲဝင်ဝင် ရှိသော ဂျွန်မက်ကိန်းသည် မဲဆောက်ဒေသသို့ ရောက်ရှိစဉ် မယ်တော်ဆေးခန်း၊ မယ်လ ခေါ် ဘဲကလော် ဒုက္ခသည်စခန်းတို့ကို သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည်။
ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း မယ်တော်ဆေးခန်းသို့ ရောက်ရှိစဉ် ဆေးခန်း၏ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အားပေးစကား ပြောသွားသည်ဟု ဆေးခန်း တာဝန်ခံ ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်ဒေသ အတွက် နိုင်ငံတကာမှ လူမှု ကူညီရေး နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ ပိုမို ရရှိရေးအတွက် တောင်းဆို တိုက်တွန်းမည်ဟု လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ပြောကြားသွားသည်ဟု ဆိုသည်။
ဂျွန်မက်ကိန်းက မြန်မာပြည်သား လေးသောင်းကျော် ခိုလှုံနေသည့် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယနေ့ အချိန်အတန်ကြာ လေ့လာခဲ့သည်။
စခန်းအတွင်း မြန်မာပြည်အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်သွားသည်ဟု ဂျွန်မက်ကိန်း နှင့် နာရီဝက်ကြာ တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း ကော်မတီဝင် နော်ဒေးဒေးဖိုးက ဧရာဝတီကို ရှင်းပြသည်။
“မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျမတို့ရဲ့ အမြင်တွေကို သူက မေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒုက္ခသည်တွေထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်က နေရပ်ရင်း ပြန်ချင်သလဲ၊ ဘယ်လောက်က အမေရိကန်မှာ အခြေချချင်လဲ ဆိုတာတွေ သူ သိချင်တယ်” ဟု နော်ဒေးဒေးဖိုးက ပြောသည်။
ရက်ပိုင်းအတွင်း သူနှင့် တွေ့ဆုံမည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရထံသို့ အမှာစကား ပါးနိုင်ကြောင်း စခန်း ကော်မတီ တာဝန်ရှိသူများကို ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
“အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ပြောပေးပါ လို့ ကျနော်တို့ ပြောလိုက်ကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်” ဟု စခန်းကော်မတီ တာဝန်ခံ ကိုထွန်းထွန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
လွှတ်တော်အမတ်က ဒုက္ခသည်များထံ သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး စကားပြောဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ဂျွန်မက်ကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကြောင့် မြန်မာအစိုးရအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးကို ထောက်ခံရာတွင် ထင်ရှားသည့် အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်သည်Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:37 PM0comments
အထက်ပေါင်းလောင်းကြောင့် လူ ၈ ထောင် ရွှေ့ပြောင်းရမည်
ကျော်ခ | အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဗြိတိသျှ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ဆောက်လုပ်ပေးနေသော ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ရေကာတာ ဆောက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းကြောင့် လူ ၈ ထောင်ခန့်ကို အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခံရမည်ဟု ကယန်းအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပင်လောင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ပေါင်းလောင်းမြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်နေသော အထက်ပေါင်းလောင်း ဆည်စီမံကိန်းအတွင်း ကျရောက်သော ကျေးရွာပေါင်း ၂၃ ရွာမှ လူဦးရေ ၇၉၉၈ ဦးမှာ နေရာသစ်များ ရှာဖွေနေကြရသည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သော Kayan New Generation Youth အဖွဲ့၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောသည်။
အထက်ပေါင်းလောင်း ဆည်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် မြင်ကွင်း (Photo:: KNGY)
အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာပြည့်က ကျေးရွာလူကြီးများကို အောက်တိုဘာလ
နောက်ဆုံးထား ပြောင်းရွှေ့ရန် ပြောကြားထားသည်ဟု
KNGY က ဆိုသည်။
“ပြောင်းရမယ့် နေရာတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ရှာပြီး
ပြောင်းခိုင်းတယ်” ဟု အဖွဲ့မှ မူမိုးလေးက မဇ္ဈိမကို
“နောက်ထပ် ပြောင်းရွှေ့ရမယ့် နေရာကလည်း
တောင်ကြောတွေပဲ ရှိတယ်။ မြေပြန့်ကို ပြောင်းမယ်
ဆိုရင်လည်း ရေအောက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတော့
ဒေသခံတွေအနေနဲ့က ဘယ်လိုလုပ်ကြရမှန်း မသိဘူး
ဖြစ်နေကြတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
ရေအားလျှပ်စစ် ၁၄ဝ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်မည့် ရေကာတာ တည်ဆောက်မှုကို Af Colenco ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ရေး အင်ဂျင်နီယာ ဒီဇိုင်းနှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အင်္ဂလန်မှ မိသားစုပိုင် မလ်ကွန် ဒွန်စတန်ကုမ္ပဏီ Malcom Dunstan Associates နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ယူနန်အကြီးစား စက်ပစ္စည်းများ ပြည်ပတင်ပို့ရေး ကုမ္ပဏီ Yunan Machinery and Export Company တို့ ပါဝင် ခလုပ်ကိုင်နေကြသည်။
အထက်ပေါင်းလောင်း ဆည်စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်တည်ရှိရာ မြေပုံ (Photo:: KNGY)
”ဥရောပက လာသည်ဖြစ်စေ၊ အာရှက လာသည်ဖြစ်စေ
သင့်လျော်တဲ့ စံသတ်မှတ်နှုန်းများကို ပစ်ပယ်လုပ်ဆောင်
နေကြတာကို ပြသနေပါတယ်” ဟု မမူမိုးလေးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အထက်ပေါင်းလောင်းနှင့် တာဆန်း
ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေးတို့ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ဒေသခံများမှာ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပြီး
တအိမ်ထောင်လျှင် ကျပ် ၅ သောင်းသာ ပေးမည်ဟု
ထွက်ရှိသော လျှပ်စစ်ကိုမူ စီမံကိန်း၏ အနောက်မြောက်ဘက် ၅ဝ ကီလိုမီတာအကွာရှိ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ
ယခုအဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် အဆိုပါကျေးရွာများက မဲပေးခဲ့ကြသော ကျားဖြူ ခေါ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် ပအိုဝ့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီထံ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း မရရှိခဲ့ပေ။
စီမံကိန်းက အဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းသလို ၆ဝ၆ ခြေမြန်
တပ်ရင်းအတွက် နေရာထိုင်ခင်းများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊
လမ်းဖောက်ခြင်းတို့တွင် ဒေသခံများကို ပေါ်တာဆွဲ
အသုံးပြုကြသေးသလို တအိမ်ထောင်လျှင် လစဉ်ကြေး
မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ကြောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်အဖွဲ့
Burma Rivers Network ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ
စိုင်းစိုင်းက “နိုင်ငံမှာ ထုတ်တဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်
အများစုပေါ့နော်။ စစ်တပ်နေရာရယ်၊ စစ်တပ်နဲ့
ပတ်သက်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ နေရာရယ်ပဲ အများစု
အသုံးပြုတယ်။ ရေကာတာ စီမံကိန်း အနီးမှာရှိတဲ့
မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရွာပဲဖြစ်ဖြစ် အများစုက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
မရဘူး။ လျှပ်စစ်ရပေမယ့်လည်း မီးရဖို့က တနေ့လာရင်
၃ ရက်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေ အမြဲတမ်း ရှိနေတယ်” ဟု ပြောသည်။
သမ္မတသစ်၏ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းတွင်လည်း သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကျယ်တဝင့် ပြောကြားသွားပြီး၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီညီ ထိန်းညှိဆောင်ရွက်မည်ဟု ပါရှိသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:29 PM0comments
ထွန်းထွန်း | အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၈ မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သောက်သုံးမှု ထိန်းချုပ်ရေး ဥပဒေ ရှိသော်လည်း လိုက်နာမှု မရှိကြသေးကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်များအသင်းက အင်္ဂါနေ့တွင်
ယင်းဥပဒေအရ အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နေရာများတွင် ဆေးလိပ်မသောက်သုံးရဇုန် သတ်မှတ်ရန်နှင့်
ဆေးလိပ်ဗူးများကို အလိပ်ချင်းမရောင်းရန် ပါဝင်သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ မဖြစ်သေးသည့်အပေါ် ပြောဆိုခြင်း
“အခု သူ့ Institution အလိုက် လိုက်ပြီးတော့ ဆေးလိပ်မသောက်ရ၊ ဌာနဆိုင်ရာအတွင်းမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရတို့ ဘာတို့တော့ ထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိတယ်။ အစိုးရဌာနမှာတော့ လုပ်ထားတာ မရှိသေးပါဘူး” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဆရာဝန်အသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာခိုင်စိုးဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဥပဒေတွင် အများပြည်သူအနေဖြင့် ဆေးလိပ်ငွေ့ ရှူရှိုက်ခြင်း အန္တရာယ်မှ
တောင်ကိုရီးယား နိုင်ငံတွင် ဆေးလိပ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူ နှစ်ဦးက စီးကရက်ပုံစံ အထူးဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကမ်ပိန်းတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲနေစဉ်။(AFP PHOTO/JUNG YEON-JE)
ကင်းဝေးစေရန် ဆေးလိပ်မသောက်ရ နေရာနှင့် အကန့်အသတ်ဖြင့်
ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ရှိသော သီးသန့်နေရာများကိုပါ အသေးစိတ်
“ဆေးလိပ်ကို အလိပ်အပြေ မရောင်းရ၊ လက်လီ မရှိရဘူးပေါ့။ ထုတ်တဲ့သူကို ကန့်သတ်တဲ့ အနေနဲ့ ဗူးလိုက်ရောင်းရမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကန့်သတ်တဲ့ အသက်အပိုင်းအခြားအရ အသက်ငယ်တယ်ဆိုရင်ကို
ရောင်းခွင့် မရှိဘူး။ စည်းမျဉ်းတွေ ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရောင်းတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်လည်း မလိုက်နာဘူး၊ ဝယ်တဲ့သူတွေကလည်း အဲဒီလို ရတဲ့နေရာမှာ လိုက်လိုက်ဝယ်ပြီး သောက်နေကြတာပါပဲ” ဟု
ယနေ့သည့် ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရနေ့ ဖြစ်ပြီး ဆောင်ပုဒ်မှာ “ဆေးလိပ် ဆေးရွက်ကြီးအန္တရာယ် ကင်းဝေးဖို့ ဥပဒေစည်းကမ်း အလေးထားလို့ ဝိုင်းဝန်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြစို့” ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထက်တန်းကျောင်းသား အရေအတွက်၏ ဆေးလိပ်သောက်နှုန်းမှာ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်က ၁ဝ.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိခဲ့ပြီး၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင်မူ ၄.၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO တို့ ပူးတွဲပြုလုပ်သည့် Global Youth Tobacco Survey - GYTS စစ်တမ်းအရ သိရသည်။
“လူငယ်တွေကို သင်တန်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆိုပါတော့ လူ ၄ဝ လောက် သင်တန်း ပေးတဲ့အထဲမှာ အနည်းဆုံးတော့ ၄ ယောက်လောက်တော့ ပြန်ပါလာတော့ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တောင် ရောက်နေတယ်။ ဒါ လူငယ်အပိုင်းမှာနော်။ ကျနော်က လောလောဆယ် လူငယ်စီမံချက်ကိုပဲ ကိုင်ထားတော့ လူကြီးပိုင်းကို မသိလိုက်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူကြီးတွေလည်း သောက်နေကြတာပဲ” ဟု သူက ပြောသည်။
ဆေးရွက်ကြီး သောက်သုံးမှုတွင်မူ ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်က ၅.၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာသည်ဟု GYTS စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
“ကွမ်းစားတဲ့သူတွေ တတ်နိုင်လို့ရှိရင် ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါတဲ့ 92 တို့၊ 100 တို့ ဒါတွေလည်း ထည့်ပြီး မစားစေချင်ဘူး။ ဒါတွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ဆေးရွက်ကြီးကို ပြုပြင်ထားတဲ့ ဟာတွေချည်းပဲ။ နောက် ဗမာဆေးဆို နည်းနည်းပိုဆိုးသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗမာဆေးကို ကျနော် ကွမ်းယာဆိုင်တွေမှာ တွေ့တာ မှိုတက်နေတဲ့ ဗမာဆေးတွေကို ထည့်သုံးနေတာတွေ ဘာတွေ။ အဲဒါတွေ ပိုဆိုးလိမ့်မယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ ဆရာဝန်တဦးကလည်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဆေးလိပ်သောက်သူများထဲတွင် သာမန်အရပ်သားများသာမက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပင် ပါဝင်နေသည်။
“အမျိုးမျိုးတော့ ပညာပေးတာပဲ။ ပညာပေးတာမှ ကျနော်တို့ဆိုရင် ဆေးခန်းစာအုပ်တွေမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရဲ့ အပြစ်တွေ အကုန်ရေးပေးတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်နေကြတာပဲ။ နောက် ဆရာဝန်တွေ ကိုယ်တိုင်က
ဆေးလိပ်သောက်နေကြတယ်။ နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတယ်။ ကုထားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးလိပ်
သောက်နေကြတုန်းပဲ” ဟု ဒေါက်တာခိုင်စိုးဝင်းက ဆိုသည်။
ဆေးလိပ်တွင် ဓာတ်ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၄၃ဝဝ ကျော်ပါဝင်ပြီး လူကို အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်သည့် ကတ္တရာ၊ နီကိုတင်း ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်၊ ဘင်ဇင်းနှင့် အမိုးနီးယားဓာတ် များစွာပါဝင်သည်။
“ကျနော့်ယောက္ခမဆိုလည်း အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ သေသွားတယ်။ ဆေးလိပ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင် သိတယ်။ အဲဒီတော့ အောက်က သားသမီး၊ သားတွေမှာလည်း တယောက်ဆိုရင်လည်း အဆုတ်ကင်ဆာနဲ့
လောလောလတ်လတ် သေသွားပြီ။ နောက်တယောက်ဆိုရင် အဲဒီဆေးလိပ်ကြောင့်ပဲ လျှာကင်ဆာဖြစ်တယ်။ ဆေးသွင်းတယ်၊ ဓာတ်ကင်ရတယ်။ နည်းနည်းလေး သက်သာလာတယ်။ ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ ဆေးလိပ်ပြန်သောက်နေတယ်။ ဆိုတော့ စွဲနေကြတာကို မဖြတ်ချင်ကြဘူး” ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ ဆရာဝန်က ဆိုသည်။
“အဓိက အဆိုးဆုံးကတော့ ကင်ဆာပေါ့ဗျာ။ ကင်ဆာဆိုရင်လည်း ပါးစပ်ထဲမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်သလို အဆုတ်ထဲမှာလည်း ကင်ဆာဖြစ်မှာပဲ။ နည်းနည်းလေး ပျော့သွားတဲ့အခါကျတော့မှ အဆုတ်ပွတယ်၊ နာတာရှည် လေပြွန်ယောင်ရောဂါတွေ ရမယ်။ နှလုံးမှာဆိုရင် သွေးကြောတွေ ကျဉ်းလာမယ်။ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းလာရင် နှလုံးပုပ်တယ်ပေါ့။ နောက် ခပ်ပျော့ပျော့ထဲကဆိုရင်တော့ အစာအိမ် အနာပေါက်မယ်။ ဒီ့ထက်ဆိုးရင် အစာအိမ်ကင်ဆာအထိ ရောက်လာနိုင်တယ်” ဟု ဒေါက်တာခိုင်စိုးဝင်းက ပြောသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ဥပေဒပြဋ္ဌာန်းထားရုံဖြင့် မလုံလောက်ဘဲ တွန်းအားပေးလုပ်ဆောင်မှုများ လိုအပ်နေကြောင်း ဆရာဝန်များ အသင်းက တိုက်တွန်းသည်။
ရောင်းရတယ်ဆိုတာမျိုးလို အတားအဆီးလေးများ လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် ရောင်းတဲ့နေရာမှာ အကန့်အသတ် ရှိလာမယ်ပေါ့။ အဲဒီ့အခါကျရင် သောက်သုံးတဲ့သူလည်း ဘာပဲပြောပြော အခွန်အခ ဈေးတက်လာလို့ရှိရင်
ဆေးလိပ်ဈေး တက်လာမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နယ်စပ်ကနေ မဝင်ဖို့လည်း အရေးကြီးသေးတယ်။ နယ်စပ်က ဝင်ပြီဆိုရင်တော့ ဈေးပေါပေါထဲကဟာတွေ ဝင်လာလိမ့်မယ်လေ” ဟု အသင်း၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး
ကမ္ဘာတဝှန်းတွင် ၂ဝ ရာစုအတွင်း ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်း သုံးစွဲမှုကြောင့် လူပေါင်း သန်း ၁ဝဝ ကို အသက်ဆုံးရှုံးစေခဲ့ပြီး ၂၁ ရာစုတွင် လူပေါင်း သန်း ၁ဝဝဝ အသက်ဆုံးရှုံးစေမည်ဟု WHO က ခန့်မှန်းထားသည်။
အစိုးရအနေဖြင့် ပညာပေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာကို အသုံးချရန်နှင့် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ဆရာဝန်အသင်းက ဆိုသည်။
“အဓိကကတော့ Multi Media အကုန်သုံးရမှာပဲ။ အသံလည်း ထုတ်ပြရမယ်။ ရုပ်တွေလည်း ထုတ်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်တယ်လို့ ကျနော် ယူဆတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ ရုပ်မြင်သံကြားက ဖြန့်ချိနိုင်လို့ရှိရင် ပိုကောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်တဲ့စရိတ်က ကြီးတယ်လေ။ ဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ တော်ရုံတန်ရုံလည်း အစိုးရက မလုပ်ရင်တော့ ကျနော်တို့လည်း မလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါ အစိုးရကတော့ တော်တော်များများ လုပ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လူကြည့်တဲ့ အချိန်မှာတော့ မလာသေးဘူး” ဟု ဒေါက်တာခိုင်စိုးဝင်းက ပြောဆိုသည်။Rest of your post
မျိုးသန့် | အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကဗျာဆရာများ၊ ဂီတ၊ စာပေ၊ ပန်းချီ၊ ပန်းပု စသည့် အနုပညာရှင်များအနေဖြင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် တာဝန်တရပ်အနေဖြင့် ကြိုးပမ်းစေလိုကြောင်း ကဗျာဆရာ ကိုငြိမ်းသစ်က တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
ဆရာငြိမ်းသစ်သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ မန္တလေးတိုင်း အရှေ့တောင်မြို့နယ် ဒုဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ပရှိ မတရားသင်းများနှင့် ဆက်သွယ်မှုဖြင့် ထောင် ၈ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီး ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်တွင် ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။ ယင်းနှစ်တွင်ပင် NLD ပါတီဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ NLD ရုံးချုပ်တွင် အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပသည့် စာပေဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ကူညီနေသည်။ ၎င်းအပြင် “ကဗျာ၊ သီချင်း၊ ပန်းချီ” လူမှုရေးကူညီမှုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး၊ နယ်မြို့နယ်များရှိ ဆင်းရဲချို့တဲ့သော စာပေ၊ ပန်းချီ၊ ဂီတ အနုပညာရှင်များကို ဆေးဝါးကုသစရိတ်များ ကူညီပေးနေသည်။
နိုင်ငံရေးတွင် အနုပညာရှင်များ ပါဝင်ပတ်သက်လာမှု၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အနုပညာ၏ အရေးပါမှု၊ လူငယ်အနုပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံရေး၊ NLD ပါတီအပေါ် အမြင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် သဘောထား စသည်တို့ကို မဇ္ဈိမ သတင်းထောက် မျိူးသန့်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
“၂ဝဝ၇ ကျနော် ထောင်က ထွက်လာတဲ့အခါ ပါတီက အင်အားချို့တဲ့နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပါတီကလည်း ဖိအားပေး အခံရဆုံး၊ အဝေဖန် အခံရဆုံး၊ ရန်သူကလည်း အဖိနှိပ်ဆုံး။ ဥပမာ - ဆိုင်းပုဒ်တွေ ဖြုတ်တယ်၊ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို ညဉ့်နက်သန်းခေါင် ခိုးတယ်၊ မြို့နယ် CEC တွေကို ဖမ်းတယ်၊ ဖမ်းပြီးတော့ နုတ်ထွက်ခိုင်းတယ်၊ မနုတ်ထွက်တဲ့လူကို အခြားပုဒ်မ တခုခုတပ်ပြီးတော့ ထောင်ချတယ်။ မြင်းမူမြို့နယ်က ဆိုင်းဘုတ်တို့၊ ချောင်းဦးက ဆိုင်းဘုတ်တို့၊ အမရပူရက ဆိုင်းဘုတ်တို့ဆိုရင် ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အဖြုတ်ခံရတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တဦးဦးရဲ့ သဘောနဲ့ လိုလိုလားလား အဖြုတ်ခံရတာ မဟုတ်ဘူး။ အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ ဖိနှိပ်တဲ့အခါမှာ ပါတီက ပြိုကွဲလျော့ရဲစ ပြုနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့က ဒီဘက်မှာ ရပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ကျနော်တို့ ရပ်တာပါ”
တချို့ယူဆချက်တွေအရ စာပေကဗျာသမားဆိုတာ ပါတီ၊ အဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့ ပတ်သက်ဆက်စပ်နေရင် သူတို့ရဲ့ ကဗျာဖန်တီးမှုဟာ မလွတ်လပ်တော့ဘူးလို့ ယူဆချက်တွေရှိပါတယ် အဲဒီအပေါ်မှာကော။
“ကျနော်တို့ တော်တော်များများက ပါတီအလံတော်တခုအောက်မှာ မရပ်ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း အဲဒီအယူအဆကို လက်ခံပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ သတင်းသမားတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ ကျန်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးက လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနုပညာဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့က ပါတီတခုအောက်၊ အလံတခုအောက်မှာ မရှိသင့်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို လုပ်နေတာလို့ပဲ ကျနော် ယုံကြည်တယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးကို ကျနော်တို့က အမျိုးသား နိုင်ငံရေးအဖြစ်နဲ့ ယုံကြည်ပြီးတော့ ဒီတပ်ဦးမှာ ရှိနေတဲ့ ဒီပါတီကို ဝန်းရံတာ၊ ဒီပါတီထဲကို ဝင်ရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်လာအပြီး ကဗျာဆရာတွေ၊ ဆရာငြိမ်းသစ်တို့ အပါအဝင် ကိုရဲလွင်တို့၊ နောက် ဇေယျာသော်တို့ ဒီအနုပညာသမားတွေဟာ NLD နဲ့ ပိုပြီးတော့ ပူးပေါင်းမှုရှိလာတယ် ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ။
“ကဗျာသမားတွေမှာ အမှန်တရားတွေ ရှိနေပြီးသားပါ။ သူတို့ဟာလည်း သာမန်ပြည်သူနဲ့ မခြားပါဘူး။ အကြောက်တရား ရှိကြတယ်။ အဲဒီအကြောက်တရားတွေက တဖြည်းဖြည်း ဖိနှိပ်မှုများလာတယ်၊ မတရားမှုတွေ များလာတယ်၊ တရားမျှတမှုတွေ နည်းလာတဲ့အခါမှာ ဒါကို ဘယ်နည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ ဘယ်နည်းနဲ့ ကာကွယ်ရမလဲ၊ ဘယ်နည်းနဲ့ တိုက်ဖျက်ရမလဲ၊ သူတို့မှာ ဆန္ဒတွေ ဖြစ်ထွန်းလာတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အခါ အခု ကျနော်တို့မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်း ရှိနေတဲ့အခါ ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်ကနေပြီးတော့ သွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆတွေလည်း ရှိတာကြောင့်ပါ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ်ကျစဉ် NLD ဟာ မျက်မြင်၊ နားမကြားကျောင်းလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ကြတဲ့ အပေါ်မှာကော။
“NLD ကို တချို့ လေ့လာသုံးသပ်မှု မရှိဘဲနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူးလို့ ဝေဖန်ကြတာရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို ကျနော် လက်မခံပါဘူး။ ကနေ့ NLD ပါတီဝင်တွေဟာ အလွန် အင်မတန်ပဲ ဖိအားပေါင်းစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာ။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ အားလုံး စွန့်လွှတ်စွန့်စားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ကြရတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တလျှောက်လုံးမှာ တွေ့နေရတာပဲလေ။ အဲဒီတော့ NLD ကလည်းပဲ အန်တီစုမှာပဲ ပါဝါအပြည့်အဝ ရှိပြီးတော့ ကျန်တဲ့ CEC တွေ၊ ဥက္ကဋ္ဌတွေမှာ အန်တီစုလောက် ပါဝါသိပ်မကြီးဘူးပေါ့လေ။ အဲဒီလို ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ပါတီကို မပျက်ရုံ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ အဆက်မပြတ်ရုံ၊ သူတို့ရတဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းထဲကနေ ကြိုးစားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲဒါကို ပါတီအပေါ်မှာ အားမရတဲ့ အသံတွေ နှောင့်နှေးတယ်၊ ကြန့်ကြာတဲ့ အချိန်ဆွဲတာကို ခံရတယ်။ တရွတ်တိုက်ကြီး ပါသွားတယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ဝေဖန်တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလူကြီးတွေကော၊ လူငယ်တွေကောက အင်မတန် ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ရန်သူနဲ့ မပူးပေါင်းဘဲနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားတာ”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မလွှတ်ခင်နဲ့ ပြန်လွတ်ပြီး NLD အပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
“အန်တီကတော့ တောက်လျှောက် နှစ်ရှည် ထိန်းသိမ်းခံရတာဆိုတော့ အန်တီ အထဲမှာ ရှိနေစဉ်က ပြည်သူလူထုက ပိုပြီးတော့ ဖိနှိပ်မှုခံရတယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ အန်တီလွတ်လာတော့ ပြည်သူလူထုက ပိုပြီးတော့ စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေ ဖြစ်လာတယ်၊ ဒီမိုကရေစီကို ပိုပြီးတော့ နီးနီးကပ်ကပ် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုလည်း ပိုပြီးတော့ မျှော်လင့်ကြတယ်။ လူထုကလည်း ပိုပြီးတော့ သတ္တိရှိလာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဖိအားတွေကို အန်တီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ တွန်းလှန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှိလာတယ်”
ကဗျာဆရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းမှုဟာ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့ ရနိုင်လဲ။
“ကျနော်တို့တွေက ဘာပဲပြောပြော အသိပညာအရဖြစ်စေ၊ အနုပညာဖန်တီးမှုအရဖြစ်စေ ပြည်သူလူထုကို ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ လူတွေက နိုင်ငံရေးအသိ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့၊ ရပ်တည်ချက် မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဦးဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ နောက်ကနေပြီးတော့ ရပ်တည်ပေးမယ်ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကလည်း တခဲနက် ပါဝင်လာမယ်၊ အတိုင်းအတာ တခုအထိလည်း အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယုံကြည်ပါတယ်”
ကဗျာ ဒါမှမဟုတ် သီချင်းတပုဒ်ဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ဘယ်လောက်အထိ အရေးပါလဲ။
မော်ဒန်လိုမျိုး ရေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြည်သူလူထုအားလုံး နားလည်နိုင်တဲ့၊ ပြည်သူလူထု အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲရောက်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြည်သူလူထု ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ အနုပညာကို ကျနော်တို့ ဖန်တီးကြတာပေါ့။ ဒီလို ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ တချို့ အင်အားကောင်းတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ အင်အားကောင်းတဲ့ ဖြည့်စွက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ သံစဉ်တွေနဲ့ သီချင်းဆိုရင်လည်း ဂီတသံစဉ်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထု ရင်ထဲကို ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် ရောက်အောင် ဖန်တီပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အနုပညာပစ္စည်းတွေဟာ ပြည်သူလူထုကို ဆွဲဆောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ သူတို့ကို တိုက်ပွဲထဲကို ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ ဆွဲခေါ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်”
လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စာပေသမားတွေ၊ ကဗျာသမားတွေကို ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
“စာပေအနုပညာရှင်တွေ၊ ဂီတအနုပညာရှင်တွေ၊ ပန်းချီ ပန်းပု အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးပေါ့လေ၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ရှိနေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို ပြောချင်တာက အရေးကြီးတာကို အရင်လုပ်ဖို့ပေါ့။ ကျနော်တို့က လူထုရဲ့ ဘဝတွေ၊ လူထုရဲ့ ခံစားမှုတွေကို အနုပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဖန်တီးနေတယ်။ လူထုဆီကို ပြန်ရောက်အောင် ပို့နေတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီအနုပညာရှင်တွေက အခုအချိန်မှာ အရေးကြီးတာကို အရင် လုပ်စေချင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဟာ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒါကို ပြည်သူထူထုရဲ့ ခံစားမှုကို ကျနော်တို့က အမြဲတမ်း နားစွင့်နေတယ်။ ကျနော်တို့က တဆင့်ခံ ခံစားမှုအနေနဲ့ ပြည်သူ့ထံ ပြန်လည်တင်ပြနေတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အဲဒီအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကိုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပြည်သူလူထု ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးဟာ ကျနော်တို့ရဲ့တာဝန်၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အနုပညာ တာဝန်အဖြစ်နဲ့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ အရေးကြီးတာကို အရင်လုပ်စေချင်တယ်လို့ ကျနော် ပြောဖြစ်ပါတယ်”
အနုပညာရှင်တွေ ကဗျာသမားတွေဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို တကယ်ကော ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလား။
“အနုပညာရှင်တွေကတော့ လူကြီးလူငယ်တွေအားလုံး တချို့ အနုပညာရှင်တွေဟာ ကျနော်တို့ထက် ဖန်တီးမှုအားလည်း ကောင်းပါတယ်၊ ကျနော်တို့ထက်လည်း အနုပညာပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင်လည်း ကျနော်တို့ထက် အတွေ့အကြုံ မြောက်မြားစွာ ရှိကြတယ်။ ကျနော်တို့ အခုအချိန်မှာ အမှန်တရားကို လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ထားပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေး လမ်းစဉ်အောက်မှာ ယုံကြည်ချက် ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့
လူငယ်တွေ ကဗျာဆရာတွေ၊ တေးရေးဆရာတွေရဲ့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်မှု အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက် ရှိပါသလဲ။
“ကျနော်ကတော့ လူငယ်အနုပညာသမားတွေနဲ့လည်း ဆုံဖြစ်တယ်။ ကိုရဲလွင်တို့လို၊ ကိုသားထွေးတို့လို တေးရေး အဆိုတော်တွေနဲ့လည်း ဆုံဖြစ်တယ်။ နောက် အပြင်မှာ တီးခတ်နေတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့လည်း ဆုံဖြစ်တယ်။ လူငယ် ကဗျာဆရာတွေနဲ့လည်း ဆုံဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က အပြင်မှာလည်း လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျနော်တို့က အနိမ့်ဆုံး သဘောတူညီချက်အရ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးနဲ့ ပေါင်းစပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ ပိုပြီးတော့ မြန်ဆန်လာတယ် ပိုပြီးတော့ အားကောင်းလာတယ်။ အဲဒါပါပဲ”
လူငယ်တွေအပေါ်မှာ ကဗျာရေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာများမျှော်လင့်လို့ ရနိုင်မလဲ။
“လူငယ်အနုပညာရှင်တွေကို ကျနော် အများကြီး အားရပါတယ်။ အားလုံးက တက်ကြွကြတယ်၊ အားလုံးက နိုးနိုးကြားကြား ရှိကြတယ်၊ နိုင်ငံရေး မျက်ခြေမပြတ်ကြပါဘူး။ နောက် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း နိုင်ငံရေးကို ရှေးရှုတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အတော်များများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့ဟာ လူထုနဲ့ အတော်ကို နီးစပ်ပါတယ်။ နောက် သူတို့က ရှာဖွေလေ့လာမှုတွေရှိတယ်၊ သူတို့က သမိုင်းရဲ့ အမွေကောင်းတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းယူနိုင်မှုလည်း ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ နိုင်ငံရေးစာပေတွေကိုလည်း ခုနောက်ပိုင်း လေ့လာလိုက်စားလာကြတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အယူအတွေလည်း ကောင်းမွန်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာတွေကို သူတို့ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဖန်တီးသွားနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်”
“သူတို့မှာ နဂိုတည်းက ရဲရင့်တက်ကြွပြီးသား ဖြစ်တယ်။ သူတို့က အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ ထက်သန်လာအောင်လည်း စာပေတွေ လေ့လာဖတ်ရှုကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်ရှိနိုင်ငံရေးရဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အကွက်တွေကိုလည်း သူတို့ မြင်နေတွေ့နေရတယ်၊ ဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နေရတယ်၊ မတရားမှုတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နေရတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ သူတို့ရင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေး အသိစိတ်တွေ အမြဲရှင်သန်နေမှာပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဒီလို အခြေခံကောင်းတွေ၊ ဒီလို အယူအဆကောင်းတွေ၊ ဒီလို သတ္တိတွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိရှိ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နောက်ကနေပြီးတော့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရပ်ကြပါလို့ ကျနော် ပြောချင်ပါတယ်”Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 10:22 PM0comments
ဆက်ကစားရင်တော့ . . @ဍဍ$$. ပေါင်ရမယ်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:41 PM0comments
နေပြည်တော် မီးရရန် ရွာ ၂၀ ကျော် ရွှေ့ရမည်
သန်းထိုက်ဦး Tuesday, 31 May 2011 17:38
နေပြည်တော်အတွက် လျှပ်စစ်မီး ထုတ်လုပ်မည့် အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနယ်မြေရှိ ရွာပေါင်း ၂၃ ရွာမှလူဦးရေ ၈၀၀၀ ကျော်သည် နေရပ်ကို စွန့်ခွာရဖွယ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
လာမည့် အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးထားပြီး ထိုဒေသမှ ထွက်ခွာကြရန် အာဏာပိုင်တို့က ဖိအားပေးနေကြောင်း ကယန်းမျိုး ဆက်သစ် လူငယ်အဖွဲ့ (KNGY) က ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ တနေရာတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားလိုက်သည်။
“ဒေသခံတွေက ဘယ်နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ရမယ် မသိဘူး၊ ပေါင်းလောင်းဒေသက တောင်ကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်လေ။ အဲဒါကြောင့် သူတို့က ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ဖို့ အရမ်း ခက်နေတယ်” ဟု KNGY အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မမူမိုးလေးက ပြောသည်။
နှစ်သက်ရာ နေရာသစ်ကို ရွေးချယ်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း ဒေသခံများက ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိသေးကြောင်း မမူမိုးလေးက ပြောသည်။
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး KNGY အဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာတစောင်ကို ယနေ့ ထုတ်ပြန်ရာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင် ခဲ့သော ဤစီမံကိန်းမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၁၄၀ ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းသည် စစ်တောင်းမြစ်၏ မြစ်လက်တက် ဖြစ်သော ပေါင်းလောင်းမြစ်ညာပိုင်းတွင် တည်ရှိပြီး နေပြည်တော်နှင့် ကီလိုမီတာ ၅၀ ခန့် အကွာအဝေးတွင် ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“၂၀၀၄ ခုနှစ်က စပြီး ကျနော့် အိမ်ဆောက်ဖို့ အတွက် ဘိလပ်မြေတွေ ၀ယ်စုလာခဲ့တာပါ၊ ခုတော့ ဒီပစ္စည်းတွေ ရေအောက် ရောက်ပြီး အဆုံးခံမယ့်အစား ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကျနော် လှူလိုက်တော့တယ်၊ ဘယ်သူမှ အိမ် မဆောက်ဝံ့ကြတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့မှာ ဘယ်ကို ပြောင်းရမယ်မှန်းလည်း မသိပါဘူးဗျာ” ဟု ဒေသခံ ရွာသားတဦးက ပြောဆိုကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ရေးထားသည်။
ထိုဒေသတွင် နေထိုင်သော မြန်မာ၊ ကယန်း၊ ပအို့ဝ် တို့မှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးကြကြောင်း၊ စီမံကိန်း လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားသော စစ်တပ်များရောက်လာပြီးနောက် ဒေသခံတို့ လုပ်အားပေးရပြီး၊ ဒဏ်ကြေး ကင်းကြေး ခေါင်းစဉ်များဖြင့်
ငွေပေးရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဒေသခံတို့၏ တောင်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ တားမြစ်ခံရကြောင်းလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လုပ်ငန်း ပြီးစီးမှု ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီ ဖြစ်သော စီမံကိန်းသည် ၂၀၁၂ တွင် အဆုံးသတ်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မည့် နေရာသစ်တွင် မြေထိုးစက်ဖြင့် မြေညှိခြင်း၊ ပြောင်းရွှေ့ရွာသစ်တိုင်းအတွက် ရေလှောင်ကန်တကန်နှုန်း တူးဖော်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု အာဏာပိုင်တို့က ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း “ပြောင်းစေအမိန့်ဖြင့် နှင်ထုတ်ခံရခြင်း” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သော AF-Colenco၊ လန်ဒန်အခြေစိုက် Malcolm Dunstan and Associates နှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ Yunnan Machinery and Export Company တို့ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ရေးထားသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:37 PM0comments
လှူတန်းလိုသူများ ၀၉ ၇၃၀ ၆၇၉၉၄ မစုလဲ့ထံဆက်သွယ် နိုင်ပါတယ်။ လူနာဆီတိုက်ရိုက်သွားရောက် လိုပါက မသန်းသန်းမြင့် (စီ)ဆောင် ဗဟို အမျိုးသ္မီးဆေးရုံ အလုံမြို့ နယ် ။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:26 PM0comments
ဧရာဝတီ Monday, 30 May 2011 17:41(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
စာကြွင်း ။ ။ သိန်းစိန် အစိုးရမှာ ဘာမှမရှိ သိန်းစိန် ပါးစပ်ပိတ်ပြီးပြုံးတာဘဲ မကြာခဏသတင်းစာမှာ တွေ့ ရမည်။ ပြုံးတာကြည့်ပြီး ပြည်သူ့ ဘ၀က ဒုံရင်း။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တက်ပြီးနောက် ၂ လခန့် အကြာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒေါ်လာ အရောင်း အ၀ယ် ကျဆင်းလျက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ဤသို့ ဖြစ်နေရခြင်းမှာ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် ဈေးကွက်တွင် မူးယစ်ဆေး ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများမှ ဒေါ်လာ ပမာဏ အမြောက်အမြားစီးဆင်းနေခြင်း၊ ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာဝယ်နိုင်စွမ်းအား တောက်လျှောက် ကျဆင်းနေခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ ငွေလဲ လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တချို့က ပြောသည်။
“အခု နယ်စပ် ဒေါ်လာ ရောင်းချင်တဲ့ ပမာဏက သိသိသာသာကို တက်လာတယ်။ အဲဒီဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာ ရောင်းလိုအား များလာရင် ပြည်တွင်း ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာတန်ဖိုး လိုက်ကျတယ်” ဟု တရုတ်နယ်စပ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေါ်လာ နှင့် ရွှေ ရောင်းဝယ်သူ ရန်ကုန်မှ စီးပွားရေးသမား တဦးက ရှင်းပြသည်။
ဒေါ်လာအရောင်းအ၀ယ်သည် နယ်စပ်ဒေသ စစ်ရေး တင်းမာမှုများနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မှ ကုန်သည် တချို့က ယူဆသည်။
“တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာမလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ ဒါတွေက ဈေးကွက်မှာ ရှိတာထုတ်ရောင်း ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ သုံးသပ်မှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒေါ်လာ တန်ဖိုး ထပ်ကျနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။
မတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ အစောပိုင်းကာလတွင် ဒေါ်လာဈေးသည် မြန်မာငွေ ၈၆၀ ၀န်းကျင်တွင် ရှိသည်။ ယခုအခါ အမေရိကန် တဒေါ်လာသည် ၈၁၅ ကျပ် နှုန်း ဖြစ်နေသည်။
ဒေါ်လာဝယ်အား အလွန် နည်းပါးနေသည့် အကြောင်းရင်း တခုမှာ စားအုန်းဆီ တင်သွင်းရန် စုပေါင်း ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့ပြီး အရင်းအနှီး ရှာကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
“စားအုန်းဆီတန် ၃၀၀၀ အထက် အနည်းဆုံးသွင်းနိုင်မှ ဆီတင်သွင်းခွင့်ပေးမယ် ဆိုတော့ စားအုန်းဆီသွင်းချင်တဲ့သူ အချင်းချင်း စုပေါင်းကုမ္ပဏီ ထောင်ကြတယ်။ အဲဒီ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်မှာ ကုန်သည်တွေ၊ စီးပွားရေးသမားတွေ စိုက်ထည့် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံကြတော့ ဈေးကွက်မှာ ၀ယ်နိုင်စွမ်းအား အတော်ကြီးကို ကျသွားတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်(UMFCCI)မှ စီးပွားရေးသမားတဦးက သုံးသပ်သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် အားသာချက်တခုမှာ သွင်းကုန် လိုင်စင်နှင့် ပို့ကုန်လိုင်စင်များ ယခင်ထက် လျှင်မြန်စွာချပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဟန့်အတား များစွာ ရှိနေသည်ဟု ကုန်သည်တို့က ညည်းညူနေကြသည်။
“လိုင်စင်လျှောက်ရတဲ့ သက်တမ်း ပိုမြန်တာပဲ ရှိတယ်။ ကျန်တာတွေက အရင်လိုပဲ။ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အဆင့်တွေက အများကြီး။ သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန် လိုင်စင် လျှောက်မယ် ဆိုရင် နေပြည်တော်ကို သွားလျှောက်ရတယ်။ ဆန်ပို့မယ် ဆိုရင် ဆန်အသင်း ထောက်ခံချက်၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း အကုန်တင် နိုင်မှ ဒီလိုင်စင်က ရတာ။ တခု မှားသွားရင် အကုန် အစက ပြန်လုပ်ရတယ်။ ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အဆင့်က အများကြီး” ဟု ရန်ကုန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ဆိုသည်။
အဆင့်ဆင့် စောင့်ဆိုင်း လျှောက်ထားရသည့် စနစ်၊ ထောက်ခံစာပေးရသည့် စနစ်တို့ကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲသင့်သည်ဟု စီးပွားရေး ပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
ထိုပညာရှင်ကပင် လက်ရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေးအခြေအနေက ဆုတ်ရိပ်ပြနေသည်ဟု သုံးသပ်သည်။
“နိုင်ငံတခုကြီးပွားတယ် ဆိုတာက ထုတ်ကုန်နဲ့ တိုင်းသလိုသွင်းကုန်ကို ကြည့်ပြီးလည်း တိုင်းတာလို့ ရတယ်။ စီးပွားရေး တကယ် တိုးတက်လာပြီ ဆိုရင် Capital goods လို့ခေါ်တဲ့ အရင်းအနှီး ကုန်စည်၊ ကုန်ထုတ် ကုန်စည်တွေ တင်သွင်းတာ မြင့်တက်လာတယ်။ ဒီမှာက Capital goods ထက် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ စားအုန်းဆီတို့လို Consumption goods သွင်းတာများတယ်။ Capital goods တင်သွင်းတာက အစိုးရပိုင်း (သို့မဟုတ်) အစိုးရ စီမံကိန်း အတွက် တင်သွင်းတာလောက်ပဲ ရှိတယ်။ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ အရင်းအနှီး ကုန်စည် သွင်းတာ နည်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။Rest of your post
ဖနိဒါ | တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၃၈ မိနစ်(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
ချင်းမိုင် (မဇ္စျိမ) ။ ။ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရေး အပါအဝင် တောင်းဆိုချက် ၃ ချက်ဖြင့် မေ ၃ဝ ရက်မှစ၍ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသွားမည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္တီးထောင်တွင် အကျဉ်းကျနေသည့် ဘိုကလေးမြို့နယ် NLD လူငယ် ကိုနေဝင်းစိုးက ပြောဆိုကြောင်း မကြာသေးခင်က ယင်းထောင်မှ ပြန်လွတ်လာသည့် ပါတီတူလူငယ် ကိုစိုင်းမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ပြန်ပြောပြသူ ၃ဝ နှစ်အရွယ် ကိုစိုင်းမင်းသိန်းသည် တိုက်ကြီးမြို့နယ် NLD လူငယ်တဦးဖြစ်ကာ လောင်စာဆီ ကျဆင်းရေးအတွက် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ထဲတွင် ရန်ကုန်၌ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသဖြင့် နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) အပါအဝင် အခြားပုဒ်မများဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ခွဲကျခံရမှ မကြာသေးခင်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏
“ဒီနေ့ ဒီပဲယင်းနေ့မှ စပြီးတော့ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြမယ်လို့ ကျနော့်ကို ကြိုပြီး ပြောပြလိုက်တာခင်ဗျ။ ပထမတချက်က စစ်မှန်တဲ့ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရေး၊ ဒုတိယအချက်က အမျိုးသား ပြန်လည်ရင့်ကြားစေမှု
ဖော်ဆောင်ရေး၊ တတိယအချက်က ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လက်နက်ချခြင်း၊ အလင်းဝင်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တန်းတူ ညီတူဆက်စပ် ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေး ဆိုတဲ့အချက် ၃ ချက်အတွက် တောင်းဆိုထားတယ်ခင်ဗျ” ဟု ကိုစိုင်းမင်းသိန်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ ကုကသကဂ္ဂနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ခန္တီးထောင်သို့ လာရောက်ရန် အကျဉ်းကျခံ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကိုနေဝင်းစိုးက ဖိတ်ခေါ်ကြောင်းပါ သူက ပြောပြသည်။
ခန္တီးထောင်တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၆ ဦး ရှိရာ ၄ ဦးမှာ ကျန်းမာရေးအရ အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုအပ်နေပြီး၊
လောင်စာဆီဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြမှုတွင် ဦးဆောင်ခဲ့သူ ရန်ကုန်အခြေစိုက် MDC ခေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လိုလားသူများအဖွဲ့ဝင် ကိုထင်ကျော်ကို လိပ်ခေါင်းရောဂါ ခံစားနေရသည်ဟု ကိုစိုင်းမင်းသိန်းက ဆိုသည်။
ခန္တီးထောင်တွင် ဦးပါကာလ (ခ) ဇော်မျိုးနိုင်၊ ကိုသန့်ဇော်မြင့်၊ ကိုမျိုးမြင့်ဝေ၊ ကိုဝင်းမြင့်မောင် ခေါ် ပဲပြုတ်၊ ဦးမောင်မောင်စိန်၊ ကိုနေဝင်းစိုး၊ ကိုထင်ကျော်၊ ကိုတင်ထူးအောင်၊ ကိုထင်အောင်၊ ကိုကျော်မိုးဦး၊ ကိုခင်မောင်ချို ခေါ် ကိုဖိုးတုတ်၊ ဦးငြိမ်းမောင်၊ ဦးညီပု(မုံရွာ)၊ သားဖြစ်သူ ကိုကျော်ကြီး၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးနှင့် မထားထားသက် စသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၆ ဦး ရှိနေသေးသည်။
မစုစုနွေးသည် မကြာခဏ ဆိုသလို နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာခံစားနေရသဖြင့် မိသားစုနှင့် နီးစပ်သည့် အကျဉ်းထောင်သို့
ပြောင်းရွှေ့စေလိုကြောင်း ကိုစိုင်းမင်းသိန်းက ပြောသည်။
ခန္တီးထောင်သည် မြို့နှင့် ၃ မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိပြီး မိုးရာသီတွင် ကုန်းလမ်းခရီးနှင့် သွားလာရ ခက်ခဲသောကြောင့်
ရေလမ်းကြောင်းမှ စက်လှေဖြင့် သွားလာရကာ အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု လိုအပ်လာပါက အချိန်မီ မကုသနိုင်သဖြင့် သေဆုံးသွားသည့် သာမန်အကျဉ်းသားများလည်း ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ Rest of your post
ဆင်းရဲသော မိသားစုများသို့ UNDP မှ ထောက်ပံ့ငွေ တစ်ချို့ အာဏာပိုင်များကို ပေးနေရ
News Date:5/30/2011 နိရဉ္ဖရာ သတင်းဌာန(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွင် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ပြန်ဝင်လာသော ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည် နေရာချထားရေး အစီအစဉ်အရ UNDP မှ ဆင်းရဲသား မိသားစုများကို ထောက်ပံ့နေသော ငွေ တစ်ချို့ကို အာဏာပိုင်များက လိုက်လံ ကောက်ခံမူများ ရှိနေကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ ငွေကောက်ခံနေမူကို စနေနေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင် ပြုလုပ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာသား တစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
" အခု ကောက်ခံနေတာက တစ်အိမ်ထောင်က ၁၀၀၀ ကျပ်စီ ကောက်ပါ တယ်။ နစကဆီက စာလာတယ်ပြောပြီး ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ ဆယ်အိမ်ခေါင်း တွေက ကောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မပေးရင် အဖမ်း ခံရနိုင်တဲ့ အတွက် တောင်းတဲ့ငွေကို ပေးနေကြပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
UNDP က ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ပြန်ဝင်လာသော မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် မိသားစုများကို အဆင့် (၅) ဆင့်ဖြင့် ကူညီနေရာ နောက်ဆုံး အဆင့် ဖြစ်သော မိမိခြေထောက်ပေါ် မိမိရပ်တည်နိုင်ရေး အစီအစဉ်အရ တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ငွေများ ထုတ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
" သူတို့က အဆင့် တစ်ကနေ ၅ ထိ တဆင့်ပီး တဆင့် ကူညီနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နံပတ် (၅) အဆင့်မှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ငွေ ၃၀၀၀ ကနေ ၅၀၀၀ ကျပ်ထိ ထုတ်ပေး နေပါတယ်။ မွေးမြူရေး အတွက် ကြက် ဆယ့်လေး ငါးကောင် ၀ယ်ဖို့ အတွက် ထုတ်ပေးတာပါ။ အဲဒီအထဲက ငွေတွေကို သူတို့ကို တစ်ထောင်စီ ပေးရမယ်ဆိုပြီး နစကမှ ကောက်ခံနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
ယခု ငွေကောက်ခံနေရသော ကျေးရွာများ ပြိုင်းတောင်၊ တောင်ချေ၊ ဒိုးတန်း၊ ဆင်သေပြင်နှင့် ဖရုံချောင်း စသည့် ကျေးရွာများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ ကျေးရွာများမှာ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး အဆိုပါ ကျေးရွာများ အနီးတည်ရှိသော အမှတ်(၂၈) ညောင်ချောင်း နစက စခန်းမှ ကောက်ခံနေခြင်း ဖြစ်သည်။
" သူတို့ ဘာအတွက် ကောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောဘူး။ သူတို့ သုံးဖို့အတွက်ဘဲ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ မပေးရင် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အချုပ်ခန်းမှာ ဖမ်းချုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေက ပေးနေရပါတယ်" ဟု သူက ပြောသည်။
ယခု ကောက်ခံနေသော ငွေမှာ သိန်းရာချီရှိပြီး သူတို့ကိုယ်ကျိုး အတွက် ကောက်ခံခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အများစု ပြည်သူများက ပြောသည်။
ကျေးရွာသားများ အနေဖြင့် ယခုလို ယူအန်ဒီပီက ပေးသောငွေကို အာဏာပိုင်များက ကောက်ယူသည့် အပေါ် မကျေနပ်သော်လည်း မည်သည့် နေရာကိုမှ မတိုင်တန်းရဲဘဲ ဖြစ်နေကြောင်း သူတို့က ပြောသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:08 PM0comments
2011-05-30 RFA(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ဒီတခေါက် လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရင် အချိန်တွေကထက် အလွန် များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ ပိနေတဲ့အကြောင်း၊ ရုံးနဲ့ အိမ်နဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့သာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း အချိန်ပြည့် သွားလာနေရကြောင်း၊ လ အနည်းငယ် ကြာရင်တော့ ခရီးထွက်ဖို့ စပြီး လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း RFA က ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ “လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” အစီအစဉ်ကနေ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:07 PM0comments
ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိသေးကြောင်းနဲ့ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မွေးနေ့ နောက်ပိုင်းမှာ ခရီး စတင်မယ်လို့ စဉ်းစားနေကြောင်း ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကို ပြောတယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဇွန် ၁၉ သူ့မွေးနေ့ ကျော်သွားတဲ့အခါမှာ ခရီးထွက်ဖို့ စဉ်းစားမယ်လို့ ကျနော်တို့ကို အဲဒီလိုပဲ ပြောတာ။ ဒေါ်စု နယ်ကို ခရီးသွားမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကိုပါ၊ သူက ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ တွေ့ချင်တဲ့ ဆန္ဒပဲ။ ဘယ်လိုပုံစံ ဖြစ်လာမယ်တော့ ကျနော်ကြိုပြီး မပြောချင်ပါဘူး”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နယ်ခရီးစဉ်ဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD အနေနဲ့ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးပြောဆိုခွင့် ရှိမရှိဆိုတဲ့ အချက်ကို စမ်းသပ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ အေအက်ဖ်ပီ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် NLD အဖွဲ့ဝင်တွေ၊ ထောက်ခံသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရက ဘာမှ တိတိကျကျ အာမ,ခံချက် ပေးထားတာ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ လုံခြုံရေးဟာ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်က ပရိသတ်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:06 PM0comments
By ဦးမိုးဇော် တနင်္လာ, 30 မေ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ဒီလပိုင်းတွေ အတွင်းမှာ ရန်ကုန်ပြင်ပကို ခရီးထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ် ဆိုတာကြောင့် သူ့ကို ထောက်ခံသူတွေဟာ ဒီပဲယင်း တိုက်ခိုက်မှုမျိုး ထပ်မံကြုံတွေ့ရမှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:05 PM0comments
By ဒေါ်ခင်မျိုးသက် တနင်္လာ, 30 မေ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
စာကြွင်း။ ပညာဟာ သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ် ဗမာပြည်မှာ ပညာ ငတ်နေတဲ့ သူတွေ ရာခိုင်နုန်းအရ ၈၀ ကျော်ရှိပါတယ် ။ (ပညာရွှေ အိုး လူမခိုး) ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရွှေငွေတွေ နေ့ ချင်းညချင်း ပျောက်သွား နိုင်ပေမယ့်ကိုယ်တတ်ထားတဲ့ ပညာကြောင့် ကိုယ်ဟာ အခန့် မသင့်လို့ မြောင်းထဲရောက်သွားဦး ဘ၀ကို မပူမပင် ဘဲ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်မှာပါ။ (အာဇာနည် ၀ိုင်းတော်သားများ)
ဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်ဟာ ဒီနှစ်မှာ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီနေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရာစုနှစ် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စကားပြောခြင်း အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားအတွက် ပေးပို့လိုက်တဲ့ ဗွီဒီယို မိန့်ခွန်းထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပညာရေးရဲ့ တန်ဖိုးကို အလေးထားပြီး ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ၊ ပညာရှင်တွေနဲ့ သတင်းထောက်တွေ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကိုလည်း ဗွီဒီယိုလင့်ခ်ကတဆင့် ဖြေကြားသွားခဲ့ရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထည့်သွင်း ဖြေကြား ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ဒေါ်ခင်မျိုးသက်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
“တရုတ် ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျမ ပါးလိုတဲ့ အမှာစကားက ရှင်းပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ အောင်မြင် တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဒါကြောင့် သဘောထား ကြီးနိုင်သလို ခြေလှမ်းသစ်တွေကိုလည်း ယူမယ်ဆိုရင် ယူနိုင်ပါတယ်။ လူတွေဆီက တင်ပြမှု အမျိုးမျိုးကိုလည်း ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင် အောင်မြင်မှုကိုလည်း တခြားသူတွေကို မျှဝေပါ။” လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:58 PM0comments
ပေးပို့ လာသူ Altsean Burma Interns ၃၁။၀၅။၁၁
စာကြွင်း ။ ဗမာပြည်ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက ကူညီထောက်ပံ့ဖို့စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် မြန်မာအစိုးရရဲ့ သမာသမတ်မကျတဲ့အစိုးရသစ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့အပေါ် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဆဲပါ။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံတွေက အကူညီဖြတ်တောက်မှူ သက်တမ်းတိုး လိုက်တယ်ဆိုတာ ဗမာအစိုးရကို ပြည်သူတွေကို ဘာလုပ်ပေးမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တာပါဘဲ။ နောက် တနှစ်မှာ မပြောင်းလဲရင်လဲ နောက်မေးခွန်းထပ်ထုတ်ဖို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက အသင့်ရှိနေမှာပါ။ ပြည်သူတွေကို အသိပေးလိုတာက မမှန်တာကို ဒီအတိုင်ကြည့်ပြီ လက်လျူရှု မနေကြစေလိုတာပါဘဲ။ တိုးတက်သော မြန်မာပြည်ပေါ်ထွန်းပါစေ။ (အာဇာနည် ၀ိုင်းတော်သားများ)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:37 PM0comments
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊နှစ်ကုန်ခါနီးအချိန်ကသန်လျင်မြို့ နယ်အတွင်းရှိရန်ကုန်အရှေ့ ပိုင်းတက္ကသိုလ်နှင့်နည်း
ပညာကောလိပ်(သန်လျင်GTC ) မှကျောင်းသားကျောင်းသူတစုတို့ ဘာသာရေးပွဲတော်တခုတွင် တွေ့ ဆုံခင်မင်
ရင်းနှီးခဲ့ကြရာမှ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ဘာသာရေး၊လူမှုရေးနှင့်အခြားကဏ္ဍများတွင် လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများလုပ်
ဒါနကျွေးမွေးခြင်း၊ဘုရားစေတီများတွင်သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းစသောလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့ တတ်နိုင်သ
လောက်တပိုင်တနိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ်နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလတွင်လည်း ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း
ဤသို့ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြရင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစတွင် ယခုလိုတပိုင်တနိုင်အပျော်တမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း
ထက်အဖွဲ့ အစည်းပုံစံစနစ်တကျပြုလုပ်၍တစ်စုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမည်ဟုစု
နှင့်လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်ရေးတာဝန်ခံစသည့်လေးဦးသောခေါင်းဆောင်များကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးအဖွဲ့ ၏လှူဒါန်းမှုများအားစနစ်တကျဖြစ်အောင်စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ဘာသာရေး
ဆိုင်ရာနေ့ ထူးနေ့ မြတ်များနှင့်လူသားမျိုးနွယ်နှင့်ဆိုင်သောအမှတ်တရနေ့ ရက်များတို့ တွင်အလှူဒါနတခုခုပြု
လုပ်ဖြစ်အောင်မိမိတို့ မုန့် ဖိုးများစု၍ပြုလုပ်ပြီး လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ပေးဆပ်လိုစိတ်နှင့်လူမှုအကျိုးပြုလိုစိတ်
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကုန်ခါနီးတွင်အဖွဲ့ နာမည်သတ်မှတ်ရန်အဖွဲ့ ဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကအဆိုပြုတင်
များစွာထဲမှ “ကရုဏာလက်” လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များ ဟူသောအမည်ကိုအများသဘောတူရွေးချယ်သတ်မှတ်
များအပြင်အရှေ့ ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ မှတင်ပြလာသောအရေးပေါ်သွေးလှူဒါန်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ GTC
(သန်လျင်နည်းပညာကောလိပ်)ကျောင်းသားများမှတင်ပြလာသော INGO,NGO အဖွဲ့ များနှင့်ချိတ်ဆက်၍မိမိ
တို့ကရုဏာလက် အဖွဲ့ သားများကိုသင်တန်းတက်စေခြင်းကိစ္စနှင့်သမ၀ါယမကောလိပ်ကျောင်းသူများမှအဆို
ခြင်းစသောလုပ်ငန်းများကိုပါ ကရုဏာလက် ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထည့်သွင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဆုံး
ဖြတ်ခဲ့ကြပြီး အရေးပေါ်သွေးလှူဒါန်းရေးတာဝန်ခံအဖြစ် သန်လျင် GTC မှကိုလင်းလင်း၊လုပ်ငန်းဖော်ဆောင်
ရေးတာဝန်အဖြစ် ကိုနိုင်သန်းဝင်းထွန်း၊အလှူငွေကောက်ခံရေးတာဝန်ခံအဖြစ်သန်လျင် GTC မှကိုသန့် ဇင်၊
ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ်ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေ၊စာရင်းစစ်အဖြစ်သမ၀ါယမဒီဂရီကောလိပ်မှမနှစ်ဦးခင်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်သင်တန်းတာဝန်ခံအဖြစ်အရှေ့ ပိုင်းတက္ကသိုလ်မှ ကိုသီဟသန်းဝင်း တို့ အားရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုအခါမြန်
မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်မှ ကိုသီဟထွန်း၊ကိုချစ်ရန်တိုးနှင့်ကိုဝေလင်းထွန်းတို့ ဦးဆောင်သောရေကြောင်း
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကပါ ကရုဏာလက် ၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လာခဲ့
သည့်အတွက်သန်လျင်မြို့ နယ်အတွင်းရှိတက္ကသိုလ်လေးခုမှကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံး လူမှုအကျိုးပြု
“ကရုဏာလက်” လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များ သည်ယခုအခါပြည်သူ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများဖြစ်သောမိဘမဲ့
လက် အဖွဲ့ ဝင်လူငယ်များအား NGO များမှဖွင့်လှစ်သင်ကြားသောအခမဲ့လူမှုအကျိုးပြုသင်တန်းများသို့ ပို့ လွှတ်
သင်ကြားပေးခြင်းတို့ အပြင်သန်လျင်မြို့ ညောင်သုံးပင်ရပ်ကွက်ရှိသမ၀ါယမဒီဂရီကောလိပ်အနီးတွင်လည်းအခ
မည့် (၂၀၁၁/၂၀၁၂) ပညာသင်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းများအတွက်ပါဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်အောင်စီစဉ်
ဆောင်ရွက်နေကြပြီး မိမိတို့ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာနှင့်တိုင်းပြည်အတွက် “ကရုဏာလက်” လူမှုအကျိုးပြုလူ
ငယ်များ ဖြစ်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများကအားကျိုးမာန်တက် ပေးဆပ်ထမ်းရွက်နေပါကြောင်း…….
“ကရုဏာလက်” လူမှုအကျိုးပြုလူငယ်များRest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:27 PM0comments
Sunday, 29 May 2011 13:23 လောကပါလ နတ်မင်း(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 8:07 PM0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ဒီတခေါက် လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အရင် အချိန်တွေကထက် အလွန် များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေနဲ့ ပိနေတဲ့အကြောင်း၊ ရုံးနဲ့ အိမ်နဲ့ အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့သာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း အချိန်ပြည့် သွားလာနေရကြောင်း၊ လ အနည်းငယ် ကြာရင်တော့ ခရီးထွက်ဖို့ စပြီး လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရကြောင်း RFA က ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ “လူထုနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” အစီအစဉ်ကနေ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာ သူ့ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်သံတွေ အခုလို ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ RFA မှ မခင်ခင်အိက စုစည်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 5:03 PM0comments
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) တနင်္ဂနွေ, 29 မေ 2011
ဆာဘီးယားမှာ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ တရားစွဲခံထားရသူ ရတ်ကို မလာဒစ်ရှ် (Ratko Mladic) ကို ဖမ်းဆီးခဲ့မှုအပေါ် ကန့်ကွက်ကြတဲ့ ဘဲလ်ဂရိတ် (Belgrade) မြို့တော်က ဆန္ဒပြပွဲ အဆုံးသတ်ချိန်မှာ ဆန္ဒပြသူတွေက ရဲတွေကို ပုလင်းတွေ၊ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ ပစ်ပေါက်ခဲ့လို့ အကြမ်းဖက်အသွင် ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
မလာဒစ်ရ်ှကို ဖမ်းတဲ့အတွက် ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြကြဖို့ ဆာဘီးယားက အမျိုးသားရေး အယူစွဲပြင်းထန်တဲ့ ရက်ဒီကယ်လ် (Radical) ပါတီက ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြကြဖို့ ဆော်သြထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က ဆန္ဒပြပွဲမှာ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းရှိသူ တချို့က အမှိုက်ပုံးတွေကို မှောက်၊ မီးရှူး မီးပန်းတွေ ပစ်ဖောက်၊ ဆိုင်ပြတင်းပေါက်တွေကို ရိုက်ခွဲ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။
အနည်းဆုံး အယောက် ၇၀ အဖမ်းခံရသလို ၁၂ ယောက်လောက် ဒဏ်ရာရသွားကြပြီး တချို့လည်း တော်တော်လေး အခြေအနေ ဆိုးတယ်လို့ ဆာဘီးယား ရုပ်သံသတင်းက ထုတ်လွှင့်သွားပါတယ်။
ရဲ ၁ ယောက်နဲ့ လူ ၃ ယောက်ကို အရေးပေါ်ကို ပို့ခဲ့ရပါတယ်။ လူပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လောက်ရှိမယ့် ဆန္ဒပြပွဲမှာ မလာဒစ်ရ်ှရဲ့ ဇနီးနဲ့ သားတို့လည်း ပါဝင် ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းက ဆာဘရန်နီဆာ (Serbrenica) မြို့မှာ မွတ်ဆလင် အမျိုးသားနဲ့ ယောက်ျားလေးပေါင်း ၈,၀၀၀ လောက်အထိကို သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မလာဒစ်ရ်ှကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တရားစွဲထားပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲ နောက်ပိုင်း ဥရောပမှာ အဆိုးဝါးဆုံး လူတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် အသတ်ခံရမှုမှာ သူ့အဖေနဲ့ လုံးဝ မပတ်သက်ပါဘူးလို့ မလာဒစ်ရ်ှရဲ့သားက သတင်းထောက်တွေကို တနင်္ဂနွေနေ့က ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူ့ဖခင်ဟာ အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့ လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်သူတွေ အများကြီးကိုတောင် ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြားဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက သူ့အဖေမသိဘဲ ဖြစ်ခဲ့တာလို့ ဒရေကို မလာဒစ်ရှ် (Drako Mladic) က ပြောပါတယ်။Rest of your post
တရုတ်အချောင်သမား ဝါဒနှင့် နားလည်ရခက်တဲ့ မြန်မာပြည်
ဂျိုးဇက်ဘောလ် | တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၃၀ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၄ နာရီ ၅၀ မိနစ်
မြန်မာပြည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အပြုအမူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာပင် အငြင်းပွါးဖွယ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။
မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြုလုပ်သော တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်ရေး မှန်သမျှကို မြန်မာအစိုးရ၏ အတိုက်အခံတို့က အမြဲလိုပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရ အဝန်းအဝိုင်းကိုသာ ကြွယ်ဝချမ်းသာစေသည်၊ လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုများ
ကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ တိုင်းပြည်အဝှမ်း အခြေအနေများကို ပို၍သာဆိုးလာစေသည်ဟု ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။ ယခုမြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တရုတ်ပြည် ခရီးစဉ် အပြီးတွင်လည်း မြန်မာဘလော့များနှင့် သတင်းများကို ကြည့်လိုက်ပါက လူ့အခွင့်အရေး အကြီးအကျယ် ချိုးဖောက်နေသာ အစိုးရများကို ထောက်ခံအားပေးနေသည်၊ ပီကင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ၂၁ ရာစု ကိုလိုနီသဖွယ် ဆက်ဆံနေသည်ဟု ပြစ်တင်ဝေဖန် ထားကြသည်ကိုသာ တွေ့ရသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တရုတ်၏ မူဝါဒသည် သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ တသမတ်တည်းသာ ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနှင့် တရုတ်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင်သည့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်တရပ်မှာ တရုတ်ရေတပ် သင်္ဘောများ မြန်မာဆိပ်ကမ်းများတွင် အထူးအခွင့်အရေးတရပ် ရရှိရေးပင် ဖြစ်သည်။ ပီကင်းသည် ယခုလည်း အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသတဝှမ်း အထူးသဖြင့် ပါကစ္စတန်နှင့် သီရိ လင်္ကာတို့တွင် အလားတူ ဆိပ်ကမ်း အခြေခံအဆောက်အအုံများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် လစ်ဗျားဆူပူအုံကြွမှုများအတွင်း တရုတ်ရေတပ်ဖွဲ့ လှုပ်ရှားလာမှုကလည်း အနောက်နိုင်ငံများ အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရုတ်သည် သူတုိ့နိုင်ငံ၏ အကျိုးစီးပွါးများကို ကာကွယ်ရာ တိုင်းပြည်တွင်းမှကယ်ထုတ်ရာတွင် ၎င်းမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံသို့ မိမိရေတပ်ဖွဲ့ကို တခါမျှ
မကြုံ ဖူးသည့် အနေအထားဖြင့် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဒေသတဝှမ်းတွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း အဆောက်အအုံများ အထူးတလည် လိုက်လံ တည်ဆောက်နေခြင်းမှာ တရုတ်၏ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်နေခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါ့ကြောင့်ပင် ပီကင်းသည် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသော သို့မဟုတ် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများကို အမြဲတစေ ပစ်မှတ်ထား ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်၏ ဆက်ဆံပုံ သဘောထားကိုလည်း အဆိုပါနိုင်ငံများက အမြဲတစေ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်တွေ့အရ တရုတ်၏ ကိုလိုနီတခု ဖြစ်သွားလိမ့်မည်ဟု လိုသည် ထက်ပို၍ ခြောက်လှန့် ပြောဆိုနေသည့် အချိန်တွင် ပီကင်းအဘို့ ကွဲပြဲနေသော
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ စာချုပ်များ အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် သူတို့လိုချင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ လိုလားချက်များကို တဘက်သတ် အသာစီးလိုသလို ရယူနိုင်စွမ်း ရှိနေစေပါသည်။
သူတို့နှင့်လုပ်သော ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သူတို့ပေးအပ်သော အကူအညီ အထောက်အပံ့များကို စိုးရိမ်ဖွယ် လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းများနှင့် ဆက်စပ် မထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ အတွက်လည်း စီးပွါးရေးနှင့် စွမ်းအင် အကျိုးစီးပွါးများကို အခြေခိုင်အောင် လုပ်နိုင်လေသည်။ တဘက် ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံ အစိုးရအဖို့လည်း အင်မတန် လိုအပ်နေသော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် နိုင်ငံရေးသြဇာကို ရရှိပြီးဖြစ်စေကာ နိုင်ငံတွင်း အာဏာခိုင်မြဲအောင်လည်း တည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်စေသည်။
သို့သော် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ ဝန်းကျင်တလျှောက် မငြိမ်မသက် ဖြစ်နေသော နိုင်ငံများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံထက် ပို၍ ပီကင်း၏ တက်ကြွပြင်းထန်သော နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကြောင့် အန္တရာယ်ရှိသော နိုင်ငံကို ရှာဖွေရန်မှာမူ မလွယ်ကူပါ။ လွန်ခဲ့သောနှစ် နိုဝင်ဘာလက ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ပါလီမန်သစ်ကို ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကာ ပေါ်ထွက်လာသည့် အစိုးရသစ်ကို ပထမဆုံး လက်ခံကြိုဆိုသည့်နိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံပင် ဖြစ်သည်။
အဆင့်မြင့် နိုင်ငံရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆိပ်ကမ်းများ၊ သဘာဝသံယံဇာတများသည် တရုတ်နိုင်ငံအဘို့ မျက်စိကျစရာချည်း ဖြစ်နေသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကအတွင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကွဲပြားနေမှုက ပီကင်းအဘို့ သူလိုချင်သော သဘောတူညီချက်များ ရယူရာတွင် တဘက်သတ် အသာစီး ရနေစေသည်။
အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရသစ်အဘို့ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရေးပါ ထင်ရှားသော အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ် ပြုလိုက်ပုံရသည်။ ဦးသိန်းစိန်သည် တရုတ် နိုင်ငံသို့ ကြာသပတေးနေ့က
ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကြီးထံ ပထမဆုံး နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူ တရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ် လာရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရွယ်အစားနှင့် အထူးသဖြင့် ဒေသတွင်း သြဇာ အရှိန်အဝါကြောင့် နိုင်ငံတွင်း နိုင်ငံရေးစနစ်များနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုတို့ မည်မျှပင် ပြောင်းလဲသည်ဖြစ်စေ
မြန်မာ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ ချမှတ်ရာတွင် အမြဲတမ်း အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေခဲ့သည်။ နေပြည်တော်နှင့် ပီကင်းဆက်ဆံရေးမှာ အမြဲချောမွေ့နေသည်ချည်းလည်း မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိနေပြည်တော် ခေါင်းဆောင်များသည် လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်များတလျှောက် ယခင် မြန်မာအစိုးရများနှင့် ပဒေသရာဇ် အစိုးရများကဲ့သို့ တရုတ် အကျိုးစီးပွါးအပေါ် အမြဲပျပ်ဝပ် ခစားနေရသည်ဟု အထင်ခံလိုစိတ် မရှိတော့ပါ။
ဤသို့ဆိုလျှင်အဘယ်ကြောင့် တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ညီငယ်လေးသဖွယ် အောက်ကျို့ ဆက်ဆံနေပါသလဲဟု မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေသည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် မလုပ်လျှင်မဖြစ်လို့ဟုဘဲ ပြောရပါမည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တနှစ်ထဲအတွက် တရုတ်နိုင်ငံသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံတန်ဘိုးရှိ နိုင်ငံတွင်း တိုက်ရိုက်နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ထိုပမာဏသည် တနှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၃ ဘီလျံသာ ဝင်ငွေရှိသည့် အစိုးရတရပ်အဘို့ အလွန်များပြားသော ပမာဏဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးဗဟိုချက်မ၌ လက်ရှိအလုံးစုံ ကွဲလွဲနေမှုသည် မြန်မာခေါင်းဆောင်များ အပေါ်သို့သာ ကျရောက်လာသည်။ နိုင်ငံရေးအရ ကြာမြင့်စွာ ကွဲလွဲနေမှုကြောင့် ပီကင်းအဘို့ နေပြည်တော်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသိသာသော အင်အားကြီးမားမှုကို ပြကာ မိမိ၏ကျယ်ပြန့်သော နိုင်ငံရေးမူဝါဒ ရည်မှန်းချက်များ ရယူရာတွင် မရအရ ရယူနိုင် စွမ်းကိုရရှိစေခဲ့သည်။
တိုင်းပြည်ရှိ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ကြီးကြီးမားမား လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကို ခံထားရသော မြန်မာအစိုးရသည် ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးကို နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေးထက် ပို၍အလေးထား စဉ်းစားမှုကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆဲပင် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် စစ်ရေးစွမ်းရည် ကွာဟမှုကို ကျဉ်းမြောင်းစေရန်သာ မြန်မာစစ်တပ် သို့မဟုတ် မြန်မာ့တပ်မတော်က ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြားအချက်များဖြစ်သော နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ကိစ္စများမှာ လျော့နည်းမှေးမှိန်ခဲ့ရသည်။ အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုသည်မှာ စစ်တပ်ဖြန့်ချက်ချထားမှု၏ တခုတည်းသော လုပ်ငန်း တာဝန်တရပ် မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့်အတူ အခြားအရေးပါသောအချက်များဖြစ်သည့် လူမှုရေး၊ စီးပွါး ရေးနှင့် လူသားလုံခြုံရေးကိစ္စများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ တရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးတွင် မညီမမျှဖြစ်နေသည့်အချက်က မြန်မာ စစ်တပ်နှင့် လက်ရှိအရပ်သားများကို ဗန်းပြထားသော အစိုးရအကြား ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရေး ဖြစ်စဉ်များကို လွှမ်းမိုးသက်ရောက်စေသည်သာ မဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့အတိုက်အခံများ၏ တကိုယ်တော် အထီးကျန် မူဝါဒများကလည်း နိုင်ငံအများအပြား၏ နိုင်ငံခြားရေးမူ ဝါဒများချမှတ်ရာတွင် ရောင်ပြန်ဟပ် ဖော်ပြနေသည်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် သာဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ လက်ဦးမှုရှိရှိ ထိတွေ့ဆက် ဆံရေးမူဝါဒများကို အတိုက်အခံများ၏ အကျီုးစီးပွါးကို ထိခိုက်စေသည်ဟု ပြောဆိုမှုများ ရှိနေသော်လည်း ယင်းတို့ကို မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ဘို့ လိုပါသည်။ ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ရာတွင် သာမန် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး
ဖြစ်ပေါ်ဘို့တင် မဟုတ်၊ သဘောတရားရေးအရ ကွဲပြားနေမှုများ ရင်ကြားစေ့ရေး အတွက်ကိုလည်း ရှေ့တန်းတင်၍ ကြိုးပမ်းဘို့ ရည်မှန်းချက် ထားရှိရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ အသစ် ချမှတ်လိုက်သော သဘောထား ရပ်တည်ချက်ကို အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ထောက်ခံလိုက်ခြင်းမှာ အားရှိစရာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် နိုဘယ်ဆုရှင် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အာဏာရများထံ ဝင်ထွက် ပြောဆိုပေးနိုင်သူများကို အလားတူ စိတ်ဓါတ်အရ ပို၍ပင် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း၏ ပြောဘို့ လိုပါသေးသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း ပြောသည်ဆိုခြင်းမှာ အတိုက်အခံများ၏ ရေရှည် ရည်မှန်းချက်များအတွက် ပို၍ပင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါလိမ့်မည်။
ပြောဆိုနေသည့် အချိန်တွင် ပီကင်းအဘို့ ကွဲပြဲနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ စာချုပ်များ အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ရာတွင် သူတို့လိုချင်သည့် စည်းကမ်းချက်များ လိုလားချက်များကို တဘက်သတ် အသာစီးလိုသလို ရယူနိုင်စွမ်း ရှိနေစေပါသည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးအရ ပြောရလျှင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နိုင်ဘို့ လိုသေးသော မြန်မာနိုင်ငံအဘို့ တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်မှန်းချက်များအပြင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အခွင့်အရေး ကာကွယ် မြှင့်တင်ပေးရေး ကိုလည်း ထည့်သွင်း စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိစေရပါမည်။
တိုတိုပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအဘို့ ကိုယ့်ပြည်တွင်း အခြေအနေကို နိုင်နင်းအောင် အရင်လုပ်ရပါဦးမည်။ ထိုအချိန် မရောက်မချင်း တရုတ်နိုင်ငံအနေနှင့် မိမိနိုင်ငံ မိမိနိုင်ငံသား အကျိုးစီးပွါးများကိုသာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် တဘက်သတ် အမြတ်ထုတ်ခွင့် ရရှိနေစေဦးမည် ဖြစ်သည်။
ထိုအကျိုးစီးပွါးဆိုသည်များမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ အကျိုးစီးပွါးအတွက် မဟုတ်သည်မှာ သေချာလှပါသည်။ ထိုအချက်သည် မြန်မာခေါင်းဆောင်များအဘို့ ဖန်တီးမှုရှိစွာ ရှေ့တန်းတင် စုပေါင်းအဖြေရှာရမည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:57 PM0comments
ကာတာနိုင်ငံသား ဘင်ဟာမန် FIFA ဥက္ကဋ္ဌလောင်း အဆိုပြုချက် ရုပ်သိမ်း
By ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန) တနင်္ဂနွေ, 29 မေ 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FIFA) ဥက္ကဋ္ဌ နေရာအတွက် ဝင်ရောက် အရွေးခံမယ့် ကာတာနိုင်ငံက မိုဟာမက် ဘင်ဟာမန် (Mohamed Bin Hammam) ဟာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး ကော်မတီ ရှေ့မှောက်မှာ စစ်ဆေးခံဖို့ နာရီပိုင်း အလိုမှာပဲ FIFA ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နေရာအတွက် ဝင်မပြိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။
ဒီလို မစ္စတာ ဘင်ဟာမန် ယှဉ်ပြိုင်မှုကနေ နှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့် FIFA မှာ သက်တမ်းရှည်လှပြီဖြစ်တဲ့ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံက ဆက်ပ် ဘလတ္တာ (Sepp Blatter) အတွက် လမ်းရှင်းသွားသလို ဖြစ်သွားရပါတယ်။
မစ္စတာ ဘင်ဟာမန်ကတော့ သူ့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဖြစ်ချင်ဇောတွေကို FIFA ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ရပ်တည်မှုတွေထက် ဦးစားမပေးနိုင်ဘူးလို့ စနေနေ့ ညပိုင်းက ပြောသွားပါတယ်။ သူရယ် မစ္စတာ ဘလတ္တာရယ်နဲ့ FIFA ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဂျက် ၀ါနာ (Jack Warner) တို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်မှုတွေမှာ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၃ ဦးလုံးကို FIFA စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ မေးမြန်းမှာပါ။
မစ္စတာ ဘင်ဟာမန်နဲ့ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ၀ါနာတို့က သူတို့ ဘာအမှားအယွင်းမှ မလုပ်ထားဘူးလို့ ပြောနေပြီး မစ္စတာ ဘလတ္တာကတော့ အချက်အလက်တွေက သက်သေပြပါလိမ့်မယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:54 PM0comments
ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ကရင်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့
Submitted by Karen Information Center on Sunday, 29 May 2011(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
၈ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ကရင်ဒုက္ခသည်များကို နေရပ်ပြန်လည် မပို့ဆောင် ရေးနှင့် ကရင်ဒေသများတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆန့်ကျင် ရှုတ်ချကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထိုကြေညာချက်တွင် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ကရင်လူမျိုးများအကြား စည်းလုံးညီညွှတ်မှု ပိုမို အားကောင်းလာစေရေး၊ မြန်မာ ပြည်၏ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများနှင့် ကရင်လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ ခံစားနေရမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအ တွင်း ရောက်ရှိနေသည့် သိန်းနှင့်ချီသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား ယာယီ လက်ခံထားပေးရန်နှင့် ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း မပြုလုပ်သေးရန် ထိုင်းအစိုးရနှင့် UNHCR တို့အား တောင်းဆိုထားသည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စောကနဲမီက “သူတို့(မြန်မာအစိုးရ)ကိုယ်သူတို့ အစိုးရလို့ ခံယူပြီး ကရင်တွေနယ် မြေမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဘမ်းပြပြီး Dam(ရေကာတာ)နေရာအဆင့်ဆင့် လာလုပ်တာဟာ နယ်မြေတွေ ဆုံးရှုံးပျက်စီးကုန်တယ်။ ဒီလို နားလှည့်ပါးရိုက်လာလုပ်တာ ဘယ်သူမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ကျနော်တို့တွေ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မလိုလားတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံတကာကို လိမ်လည်ပြီး တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတွေကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော် တို့ Karen Unity Seminar အနေနဲ့ မတ်မတ်ရပ်ပြီး ဒါကို လုံးဝ ဆန့်ကျင်တာ၊ ရှုတ်ချတာ ဖြစ်တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ သူက “ဒုက္ခသည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ခိုင်းပြောင်းခိုင်းတာတွေ မလုပ်ရဘူးဆိုတာ ဥပဒေရှိ တယ်။ ကျနော်တို့က တကမ္ဘာလုံးက ပြဌာန်းထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဥပဒေအရဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ္တိပြတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ အမှန်တရားဘက်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာရယ်၊ ခိုင်မာတဲ့ အခြေခံ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာရယ် ပါ။”ဟု ရှင်းပြသည်။
၎င်းအပြင် အခုတက်လာသည့် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအနေဖြင့် အင်အားတောင့်တင်းပြီး အဆင့်မြင့်သည့် စစ်တပ်ကို ထူထောင်ပါက ကရင်ဒေသများအတွင်း ဆိုးဝါးသော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်း၊ လူထု၏ အိုးအိမ် မြေယာများ ပိုမို ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနိုင်ခြင်းနှင့် လူသားများအပေါ် စစ်ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်နေသည့်အတွက် ကုလသမဂ္ဂ မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင် စေလွှတ်၍ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအား အရေးယူမှုများ ချက်ချင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်လည်း နှီးနှော ဖလှယ်ပွဲက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ ပြည်တွင်းနှင့် ယူကေ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ စင်္ကာပူ၊ သြစတြေးလျားနိုင်ငံများမှ ကရင်တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
UK မှ စောဝင်းစတန်တောက “ကျနော် ဒီစီမီနာကို ပထမဆုံးရောက်လာတာပဲ။ ဆွေးနွေးမှုတွေအတွင်းမှာ အချေအတင် ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးအဖြေရှာကြတာဟာ ဆုံမှတ်ကိုတွေ့ရှိသွားသလို စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတဲ့ တော်လှန်ရေးအတွေ့အကြုံ သဘောတရားတွေကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ပြည်တွင်းကိုယ်စားလှယ်တဦးကလည်း “အခုလို ကရင်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေ ဒုက္ခအခက်အခဲကြားက မတူကွဲပြားတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးဖို့ လာရောက်ဆွေးနွေးကြတာ အားရကျေနပ်မှု အတော်ရပါ တယ်။ နိုင်ငံရေး၊ အမျိုးသားရေးပန်းတိုင်ကို ဒီစီမီနာမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး တွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ပြည်တွင်းမှာဆို ဘာဆို ဘာမှ သိခွင့်၊ လုပ်ခွင့်မရှိဘူး။”ဟု ဆိုသည်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ စောလှထွန်းက “နိုင်ငံတကာက ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ခရိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေ နဲ့ ပြည်တွင်းကိုယ်စားလှယ်တွေ အခုလို လာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကရင်အမျိုးသားတွေရဲ့ စည်းလုံးမှုပြိုကွဲစေမယ့် အကြောင်း အရာတွေကို ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကာကွယ်ပေးကြ၊ နည်းလမ်းအဖြေရှာကြတာဟာ အင်မတန်မှ အားရကျေနပ် မှု ရှိပါတယ်။”ဟု ပြောဆိုသည်။
မေလ ၂၄ရက်မှ ၂၇ရက်နေ့အထိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တနေရာတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည့် ထိုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့ ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ကရင်အဖွဲ့အစည်း(၄၂)ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မျိုးဆက်သစ် နိုင်ငံရေးကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့် လေ့လာ သူများ စုစုပေါင်း ၁၁၇ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။Rest of your post
Posted by ဒေါင်းတမာန် at 4:53 PM0comments
ကလေးထောင်တွင် သံဃာ့ခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဆန္ဒပြ
သတင်း | May 29th, 2011 | စာရေးသူ - ရိုးမ ၃(ပေးပို့ သူ-ဗမာ့သွေး)
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် ရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှု ခေါင်းဆောင် အရှင်ဂမ္ဘီရနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ထောင်တွင်းဆန္ဒပြမည့် သတင်းများထွက်ပေါ်နေခြင်းကြောင်း မိသားစုဝင်များကို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ပိတ်လိုက်သည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမည့် အခြေအနေရှိနေသည့်အတွက် အာဏာပိုင်တွေဘက်က ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ပိတ်လိုက်တာခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေလ (၂၇) ရက်နေ့က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ခဲ့သည့် အစ်မဖြစ်သူ မခင်သူဌေးက ပြောသည်။
“သူတို့ကပိတ်တာပေါ့ အရင်ဆိုလို့ရှိရင် တလကို ဒါ နှစ်ကြိမ်တွေ့ခွင့်ရတယ်လေ၊ ဦးဇင်းကိုတွေ့ချင်လို့မို့သာ သက်သပ်မဲ့ (၁၅)ရက် ပြည့်အောင် ထိုင်စောင့်နေရတာလေ အဲဒါ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ မတွေ့ခဲ့ရတာ အဲဒီထောင်ထဲကို နယ်မြေခံရဲနဲ့ အက်စ်ဘီလာမယ်တဲ့ အဲဒီ့ဝင်လာ ပြီးတော့ ဒီမှာတဲ့ ဒီနေ့ ဦးဇင်းတို့ ဆန္ဒပြမယ်ကြားလို့ လာကြတာ၊ သတင်းလာယူတာလို့ ပြောတယ် ပြီးရင်အက်စ်ဘီတွေလည်း ထပ်ပြီးရောက်လာကြအုံးမှာလို့ ပြောတယ်” ဟု မခင်သူဌေးက ပြောသည်။
မေလ (၁၁)ရက်နေ့က အရှင်ဂမ္ဘီရအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၄)ဦးက အကျဉ်းထောင်အတွင်း ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အစားအသောက် အပြည့်အဝရရှိရေး၊ မိသားစုနဲ့ လွတ်လပ်စွာ စကားပြောဆိုခွင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ် စကားပြောခွင့်နှင့် အကျဉ်းထောင်လက်စွဲ စာအုပ်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အခွင့်အရေးများ ရရှိရန် စသည့်အချက် (၆) ချက်ကို မြန်မာအစိုးရသစ်နှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါတောင်းဆိုချက်များကို သက်ဆိုင်ရာက မလိုက်လျောပါက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမယ်ဟု အရှင်ဂမ္ဘီရကပြောကြားကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ထောင်ဝင်စာ တွေ့ပြီးနောက် အစ်မဖြစ်သူ မခင်သူဌေးက သတင်းဌာနများကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအပတ် သောကြာနေ့တွင် ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မရသည့် အခြေအနေနှင့် အစားအသောက်၊ စာအုပ်၊ ပါဆယ်ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း စားစရာများကို လက်ခံထားတာမရှိဘဲ ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေကိုသာ အရှင်ဂမ္ဘီရကိုယ်စား အခြားတဦးက လက်မှတ်ထိုးလက်ခံခဲ့ခြင်းကြောင့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေ ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု မဖြစ်သူ မခင်သူဌေးက ဆက်ပြောသည်။
“အစားအသောက်က အဲဒါ လက်ခံထားတာတော့ မတွေ့ရဘူး။ စာအုပ်စာတမ်းတွေကိုတော့ ဂေါက်ချစ်ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးပြီး ယူထားတယ်ရှင့်၊ နယ်မြေခံရဲတွေ အက်စ်ဘီတွေ လာပုံ ထောက်ရင်တော့ အဲဒါ သေချာသလောက်ပဲလို့ ကျမတော့ထင်တယ်။ အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြမှာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
အရှင်ဂမ္ဘီရအပါအ၀င် ဦးညီပု၊ ကိုဌေးအောင် (ခေါ်)ကိုအောင်မြတ်နှင့် ကိုမင်းမင်းထွန်းတို့ (၄)ဦး ရေးသားတောင်းဆိုခဲ့သည့်အချက် (၆)ချက်ပါ စာရွက်သည် ကလေးအကျဉ်းဦးစီးဌာနတံဆိပ်ဖြင့် ပြင်ပကို ရောက်ရှိခဲ့သည့်အတွက် ထောင်ဝန်ထမ်းအချို့ စစ်အဆေးခံရပြီး နယ်ပြောင်းခံရနိုင်ပြီး အရှင်ဂမ္ဘီရတို့အတွက်လည်း စိတ်ပူနေရကြောင်း မခင်သူဌေးက ဆက်ပြောသည်။
“၁၄ ရက်နေ့ တွေ့တဲ့နေ့က အက်စ်ဘီတွေလည်းမရှိဘူး ထောင်မှူး ထောင်ပိုင်တွေလည်းမရှိဘူး အဲဒီနေ့က ဗိုလ်ချုပ်သာအေးရောက်တဲ့နေ့ ဆိုတော့ အဲဒီကို သွားရတယ်ထင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းအသစ် ကလေးတွေ (၄)ယောက်ပဲရှိတယ်။ ဟိုတယောက်ပြောတာတော့ နားမလည်လို့ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် ထုတ်ခွင့်မရှိဘူး လို့ပြောတာပဲ။ အဲဒီကလေးတွေတော့ အတော်အကြပ်ခံနေရ တယ်ပေါ့နော်၊ အစစ်ဆေးခံနေရတယ်တဲ့ နယ်ပြောင်း ခံရမယ်လို့တော့ပြောတယ်။ ဒါဆိုလို့ ရှိရင် ဦးဇင်းတို့ကော ဖိအားပေးလားဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့တော့ မပေးဘူးလို့တော့ပြောတာပဲ ဒါပေမယ့် စိတ်တော့ ပူတာပေါ့။ တွေ့ရမယ့်အချိန်မှာ မတွေ့ရတော့”ဟု ပြောသည်။Rest of your post